Bilua - Billgba ụgwọ, ekwentị, kọntaktị email na ndị ọzọ | ECommerce ozi ọma
Bilua na-atụ anya ịkwụ ụgwọ nde euro 10 na 2014
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, Ndị egwuregwu dị ọcha
Bilua, ìgwè pụrụ iche na e-azụmahịa nke ngwaahịa ezinụlọ nke sitere na ụlọ ọrụ Miscota, ọ na-atụ anya ịrịọ 10 nde euro na 2014, yabụ na-atụ anya mmụba dị egwu ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Onu ogugu ndi otu Bilua, nke na 2013 bu 4,3 nde euro, toro na onu ogugu nke 600%, na-enweta site na inwe ulo ahia 4 na ntanetị nke ngwaahịa maka ezinụlọ dum.
Ụlọ ọrụ ahụ Miskọta ekwuputala ihe e kere eke nke Bilua e-commerce ọhụrụ, nke kemgbe February gara aga malitere ịchịkwa ụlọ ahịa anọ ọkachamara na ngwaahịa maka ezinụlọ dum: Nwa (ọkachamara na ngwaahịa maka ụmụ ọhụrụ na ụmụaka), Biuky (ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe ha na-ere ngwaahịa na-esi ísì ụtọ, ihe ịchọ mma, ọla na ngwa), Nlekọta (parapharmacy) na Miskọta (anụ ụlọ). Ejiri otu a na ebumnuche nke ịbụ ndị mbụ na-echekwa ngwaahịa na ntanetị maka ezinụlọ dum, ("ihe maka ezinụlọ"), nke ndị isi European.
1 Bilua dị ka eCommerce
2 Bilua Ekwentị
Bilua dị ka eCommerce
Bilua bụ nsonaazụ nke mgbasawanye azụmahịa ọrịre nke ngwaahịa anụ ụlọ bidoro na 2012, nke chọrọ ịbawanye ahịa na ntụgharị site na imepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị ọhụụ ọkachamara na ngwaahịa na ọrụ dị iche iche maka ezinụlọ.
Yabụ, n'ime afọ abụọ gara aga, Bilua ejirila bulie azụmaahịa na ọnụego 600% kwa afọ, na-aga site na otu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anọ ruo anọ, yana ndị ọrụ karịrị mmadụ 40, na nke mechiri 2013 na ntụgharị nke euro 4,3. Na 2012 ha malitere na ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị Miskọta. Na ọkara nke afọ gara aga, abụọ n'ime ụlọ ahịa anọ dị ugbu a jikọtara: Beibito.es, maka nlekọta ụmụaka na Biuky.es, ndị ọkachamara na ngwaahịa mara mma site na nnweta. Ugbua na ọkara nke abụọ nke otu afọ ahụ kere Carethy.es, site na ngalaba parapharmacy.
Ka ọ dị ugbu a, otu Bilua nwere nke ụlọ ahịa anọ na asụsụ iri ma na-ere ngwaahịa ya na ahịa 25 na European Union, gụnyere France, Italy, Portugal, Belgium, Netherlands, Germany, Austria, Poland na Luxembourg. Ọzọkwa, ụlọ ahịa ndị ahụ nwere katalọgụ nke ihe karịrị 100.000 ngwaahịa ma tinye karịa ezinụlọ 100.000 dị ka ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ Bilua ọrụ ndị ahịa Nwere ike ịkpọ isi ụlọ ọrụ ya na Barcelona onye akara ya bụ 933967172.
Ọ bụrụ na nọmba ekwentị dị n’elu azaghị gị, gbalịa kpọọ isi ụlọ ọrụ ha na mba ụwa mana ọ ga-abụ na ha ga-aza gị n ’asụsụ bekee, kwa, buru n’uche na ọnụego ịkpọ mba ofesi ka elu ma ụgwọ ekwentị gị nwere ike ibuwanye. Nke a bụ nọmba ekwentị Bilua + 44 20 3318 2091.
Ma olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, kwa ha nwere kọntaktị email ya mere i nwere ike izigara ha ozi gị: contact@bilua.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Ndị egwuregwu dị ọcha » Bilua na-atụ anya ịkwụ ụgwọ nde euro 10 na 2014
Ihe 162 kwuru, hapụ nke gị
Enweela m nzụta otu edemede na bilua e Comerc, na eziokwu bụ na agaghị m ekwughachi ya, mgbe ụbọchị iri abụọ na abụọ gachara, m zitere gị ozi email na-arịọ maka ọkwa ya. Ihe ijuanya m bụ azịza a natara, - anyị ezipụghị ya n'ihi enweghị ngwaahịa! Kedu mgbe ị na-eme atụmatụ igwa m? Ka o sina dị, egbu egbu, ruo taa m ka maara ma ọ bụrụ na ihe niile ga-aga nke ọma n'ihi na ha emebeghị m nkwụghachi nke ego
Ndewo, otu ihe ahụ mere m, otu ihe ahụ, olee otu ị ga-esi kpọsaa dị ka ụlọ ọrụ siri ike, ị nwere ike ịgba ụgwọ ugbu a, nke anyị
Eme soy dijo
MERCEDES ..., Otu ihe a mere m mgbe m kwụrụ ụgwọ maka ngwaahịa ahụ na n'ihi ọsọ ọsọ nke ezumike Ista, peeji nke ị na-etinye iwu ga-eche na ọ bụrụ na enweghị ngwaahịa ọ gaghị enye gị ohere ịtụ ahịa ..., n'ihi na emechara ya ma mechaa iwu ahụ n'ụzọ zuru oke, gaa n'ihu na ịkwụ ụgwọ, ha na-egosi ụbọchị nnyefe, ụbọchị nnyefe gafere, ana m anwa ịkpọtụrụ ha site na ekwentị na otu nọmba na-egosi ma na-achọ ntanetị na 93 3967172 na kwuru na ọ bụ site na Llinars del Vallés mgbe akara a sitere na Barcelona na ị ga - enweta ebe ị na - egosi na ị kpọtụrụ ha ị ga - eme ya site na weebụsaịtị yana na 24 ruo 48 awa ha ga - aza gị… .., Lgha na aghụghọ
Zaghachi Eme Soy
Chei, ihe m huru, abughi m otu. Anọ m na-atụ egwu na enwere pusi kpọchiri ụlọ ọrụ a. Karịsịa mgbe ha hụrụ na ha anaghị aza ma ọ nweghị ụzọ isi kpọtụrụ ha… .. dị ka ụlọ ọrụ ekwentị….
Etinyere m ma kwụọ ụgwọ maka iwu 2 ọnwa gara aga, nke kwesịrị ịnata na 10 ụbọchị ma m ka na-eche. Ha anaghị aza ozi m na ekwentị anaghị aza. Anyị na-eche ihu ezigbo aghụghọ ????? Kedu ka ha ga-esi gaa n'ihu na ntanetị? Onye kwesiri ikpesa ha.
Andrew Ortega dijo
Ajụrụ m ụfọdụ ngwaahịa ha zitere m ọla edo nke m na-arịọghị, iji kwuo nke ọma na m rịọrọ maka ihe 1 ma ha zitere m 3, ndị ọzọ ha eziteghị m- ego m kwụrụ maka akwụkwọ ọnụahịa ahụ bụ ihe € 36 na nke Ha zipụrụ akwụkwọ ndekọ aha nwata ahụ maka ihe dịka euro iri abụọ na atọ, ha alọghachila m 12 € ndị fọdụrụ ha zuru. ndị a bụ ndị zuru ohi
Zaghachi Andres Ortega
Abụ m otu ndị ọzọ merụrụ ahụ nke ndị a na-enweghị ike ịkọwapụta, mgbe m gụsịrị ihe 90 kwuru, ọ baghị uru ịgwa m okwu m n'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ, oge nnyefe na-enweghị ngwụcha, nkwukọrịta efu, nọmba ekwentị na-adịghị arụ ọrụ ... Echere m na ọ nweghị uru ịgba egwu. na ebe nrụọrụ weebụ a, ọ bụ ezie na O nyeere m aka ịchọta gị, mana oge eruola ime ihe, ọ bụrụ na anyị dịrị n'otu, anyị nwere ike ịkwụsị ndị a scammers.
Emepụtara m email na-adịru nwa oge, m ga-arịọ gị ka ị zitere m ekwentị gị iji mepụta otu WhatsApp ma hazie onwe anyị iji kwadebe nkwupụta. Dịka m chere na ụfọdụ n'ime Bilua ga-abanye anyị, aga m arịọ gị maka ihe akaebe iji kwado na emerụrụ gị ahụ n'ezie, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na otu n'ime ha abanye anyị ma chọọ ịgba akwụkwọ n'onwe ya ọ ga-adịrị anyị mma.
Emeghewo m esemokwu na Paypall, akọwakwaara m ha okwu ahụ, mana ha gwara m na iji mee ihe ha chọrọ ịnwekwu nkwupụta, agbanyeghị m kwenyere na ụzọ ahụ abụghị Paypall kama ịmalite na OMIC, anyị ga-ahụ otu anyị ga-esi mee ya, a na m akpọku gị ka ịhapụrụ ahụmịhe gị na ìgwè mmadụ a na Ciao.
Enwekwara m ụdị nsogbu a na ụlọ ọrụ a: Miscota / Bilua. Ahụrụ m na ozi ahụ sitere n'oge gara aga ma amaghị m otu esi edozi nsogbu gị, maọbụ ọ bụrụ na ị ka nọ na ya.
Ọ bụrụ na ị ka nọ na ya, ọ ga-amasị m inwe ike ịkpọtụrụ gị ma sonyere ndị otu a ka ịmee mkpesa ahụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere ike iduzi m na ihe ...
Ana m ele anya nzaghachi gị, daalụ nke ukwuu !!!
Ndewo Alexia, emere m iwu na njedebe nke ọnwa gara aga na ruo taa, ọ nweghị ụzọ m ga-esi kpọtụrụ ha ma ọ na-agba ume, mana achọghị m ịnọdụ ala, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na anyị enwetaghị otu nzaghachi. site na ndị a na-enweghị ike ịkọwapụta, m ga-achọ inwe ike ịkpọkọta ndị ọzọ emetụtara ma hụ ụzọ anyị ga-esi edozi ọnọdụ a.
Ndewo Ana, Alexia na ndị ọzọ metụtara, m ga-achọ ịma ma ị mechara nwee ike ịkpọtụrụ ndị a na-enweghị ike ịkọwapụta, ma ọ bụrụ na ha edozi gị nsogbu ahụ. Enwere m nnukwu nsogbu n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ha, ọbụnadị na Facebook, ebe m hapụrụ ha ozi na obere ozi pụtara na-ekwu na ha ga-enyocha ozi ahụ tupu ebipụta ya.
Abụ m onye ọzọ merụrụ ahụ nke ndị a na-enweghị ike ịkọwapụta, mgbe m gụsịrị ihe 90 kwuru, ọ baghị uru ịgwa m okwu m n'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ, oge nnyefe na-enweghị ngwụcha, mkparịta ụka na-enweghị isi, ekwentị na-adịghị arụ ọrụ ... Echere m na ọ nweghị uru ịgba ụkwụ na nke a. website, ọ bụ ezie na O nyeere m aka ịchọta gị, mana ọ bụ oge ime ihe, ọ bụrụ na anyị jikọọ ọnụ, anyị nwere ike ịkwụsị ndị a scammers.
Emeela m email na-adịru nwa oge, (Ekwela ka m bipụta ya ebe a) M ga-arịọ gị ka ị zitere m ekwentị gị iji mepụta otu WhatsApp ma hazie onwe anyị iji kwadebe nkwupụta. Dịka m chere na ụfọdụ n'ime Bilua ga-abanye anyị, aga m arịọ gị maka ihe akaebe iji kwado na emerụrụ gị ahụ n'ezie, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na otu n'ime ha abanye anyị ma chọọ ịgba akwụkwọ n'onwe ya ọ ga-adịrị anyị mma.
Emeghewo m esemokwu na Paypall, akọwakwaara m ha ikpe ahụ, mana ha na-agwa m na iji mee ihe ha chọrọ ịnwekwu nkwupụta, agbanyeghị echere m na ụzọ ahụ abụghị Paypall kama ịmalite na OMIC, anyị ga-ahụ otu anyị ga-esi mee ya, a na m akpọku gị ka ịhapụrụ ahụmịhe gị na ìgwè mmadụ a na Ciao. (Lee maka Miscota, Bilua, Carethy)
Daniel Gonzalez Lillo dijo
M na nke ahụ. M kọọrọ ha site na OCU nke nke m so na mgbe na-akwụ ụgwọ a 24 hour nzipu ozi, (€ 8,99) ngwaahịa e zigara m na September 29… .. M ka na-eche. Mgbe m kwuchara, ha nyere m ngwaahịa nwere njirimara ndị yiri ya. Maka ugbu a, ọ dị na cronoexpress, mana ọ tụọla ọrụ m iji nweta m iwu, yana ahụike. Agaghị m azụta gị ihe ọ bụla ọzọ. Na mgbakwunye, ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ha ma ọ bụrụ na ọ bụghị site na weebụsaịtị ha site na mpempe akwụkwọ ahụ wee mezie nzaghachi ahụ ka emechaa. Maka m, ha bụ ndị SCAMMERS!
Zaghachi daniel gonzalez lillo
Ejikwa m aja, o bu oge izizi nke na eme m na ntaneti, o juru m anya. Obi siri m ike na enweghị nsogbu ọ bụla ugbu a, amaghịkwa m eme ihe.
N’ikpeazu, made meela otu? Amaghị m otu esi akpọtụrụ gị ebe ọ bụ na enweghị adreesị ozi-e, enweghị nọmba ekwentị ma ọ bụ ihe ọ bụla
Ekwentị ebe ha mechara zaa m
Agaghị m azụta n'aka ha ọzọ.
Na njedebe achọtara m nọmba ekwentị a 933967172 ndọtị 122 bụ maka ọrụ mmadụ, ha enyefewo m oku ahụ.
Emegharịrị iwu m na ọ ga-abata echi, ka anyị lee ma ọ bụ eziokwu.
Chukwu !! Agaghị m azụta n'aka ha ọzọ !!
Daalụ Rosa maka ekwentị. Akụkọ m, SCAM bụ ndị a:
-Na Disemba 31 M zụtara ihe dị ka euro 30 na WELLINDAL na ibe weebụ: CASA, JARDÍN Y BRICOLAJE. Na nke anọ m hụrụ n’ụlọ akụ m na ha eboola ya ebubo.
-Na Jenụwarị 10 ha zitere m email site na ụlọ ọrụ ọzọ '' BILUA '' nke dabeere na LLinars del Valles na Barcelona, ​​na-ekwu na ha enweghị edemede a ma ha na-enye m ndị ọzọ. Azaghachiri m na enwere m mmasị naanị na nke m rịọrọ maka ya na ọ bụghị ndị ọzọ, agbakwunyere m na ha boro m ebubo na-ekwughi ngwaahịa ma ya mere na ha nyeghachi m ego m.
Ha azaghị m. Na mgbakwunye, ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ha, enweghị ozi, ma ọ bụ nọmba ọrụ ndị ahịa. Na ibe ya enwere ngalaba nke na-egosi na ị nwere ike ịkagbu iwu, wdg. Iegha, ọ gaghị ekwe omume isoro ha kwurịta okwu. Ọ bụ aghụghọ.
A ga-akọrọ ya OCU na FACUA.
Nke a bụ ọha na eze iji jee ozi ịdọ aka na ntị na ibe ịzụ ahịa n'ịntanetị a, ma nke WELLINDAL NA nke BILUA.
Ndewo Rosa, iwu gị eruola? Ana m arịa ọrịa na-akpọ ekwentị ahụ na ndọtị 122 ma ọ dịghị onye na - anakọta ya!
Ndewo Salva, abum onye ozo emetutara na ihe ichoro di ka ezigbo echiche. Nwere ike ịnye m adreesị ozi-e ahụ ka m wee nye gị nọmba ekwentị m? Daalụ!
Zaghachi nye Ángel Vilches
Onye ozo metutara ebe a. Gịnị bụ adreesị ozi-e ahụ?
nke otu ihe ahụ ... Enweela m iwu maka ụmụ nwoke nke bilua, atụmatụ e mere atụmatụ bụ maka December 20, anyị nọ na Disemba 28 ma ọ nweghị ihe ọ bụla ... ha zitere m email na nọmba ọnụọgụ na onye ọzọ koodu ntinye nke usoro, ikekwe ọ bụ na ndozi, ma ọ bụrụ na m na-ele ya anya site na kidit web ... ma na seur ha amaghị ọbụna koodu ahụ ma ọ bụrụ na ọ kwekọrọ na iwu m n'ihi na ha enweghị ike chọta ya ... na njikọ a na-eche na ọfịs jaen ... na-azọrọ OMIC ma ọ bụ FACUA… iwu m ruru € 245… ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime gị nọnyeere m, kpọtụrụ site na e-mail a daalụ. ira.kidits@outlook.es
Zaghachi ka mjose
Ha anakọtara ma anaghị m enweta iwu ahụ.
hello chekwaa, abum onye ozo emetutara ndi a. Emeela otu WhatsApp?
Zaghachi ka REBEKA
Ụjọ na-atụ m !!! Naanị m zụtara ihe ... na otu ihe ị na-ekwu, ọ nweghị ụzọ isi kpọtụrụ ndị a ... ọ dịghị ụlọ ọrụ na-etinye aka ??? iwu a ọ dị ?????
Ezi ntụziakadebelezacaseira dijo
Mama Mia nyere iwu na 19th ma ha agaghị eziga m.
Ọ bụ akwụkwọ PATHETIC kachasị m mara!
Ha enweghị ike ịkọwapụta ha! M na-akpọ maka ụbọchị 4 ma ọ dịghị onye na-aza ekwentị. Ha ezitela m edemede na-ezighi ezi ma achọrọ m nke m rịọrọ maka ya ma ha enyeghị m azịza ọ bụla n'ihi na ha azaghị ozi ịntanetị kwa! Aga m ekwupụta ha !!
Kidit, otu n’ime ngalaba ụlọ ọrụ a bụ nke nọ kemgbe ọnwa Julaị afọ 2015 n’emeghị ihe omume m nwere buuru nwa m. Anyị na-aga na nwa m nwoke ga-akwụsị iji ya eme ihe ma ha agaghị edozi m ihe ahụ merenụ. M na-emejọ ha site na ozi ịntanetị ma na-arịọ mgbe niile ka m lebara anya karịa ma ọ nweghị ihe ọ bụla, naanị m na-enweta ozi akpaka na-enweghị isi. Akpọtụrụla m ọrụ ndị ahịa nke ụgbọ ibu ọtụtụ ugboro ma ha gwara m na ha enweghị ndị ahịa, na ha na-azụta n'ọtụtụ buru ibu na mba ndị ọzọ ma yabụ enweghị ike inye m nnọchi nke isiokwu ahụ. Ihere na jọrọ njọ ahịa ọrụ. Biko egbula n'ime ngalaba nke ụlọ ọrụ a, enweghị m ọchioma ịnweta ozi a ma m ka na-akọcha ha. Jisie onye ọ bụla metụtara.
Zaghachi na RO "("
Companylọ ọrụ ahụ dị nso na obodo m ma ajuola m ọtụtụ oge m na-eche maka anụ ụlọ m na ihe niile abịakwutela m nke ọma. Echere m na ọrụ ahụ emeela ka ọ dịkwuo mma n'oge na-adịbeghị anya. N'usoro ikpeazu m natara ngwaahịa na-ezighi ezi ma kpọtụrụ ha site na tiketi .. Obi dị nwa nwoke ahụ bịara m, echere m na aha ya bụ Miguel. Achịkọtara m ngwaahịa ahụ wee ziga nke ziri ezi ka ụbọchị 2 gachara. Aga m aga ahịa
Mariangeles Echere m na ị bụ otu n'ime ha ma ọ bụrụ na ọ bụghị, zitere m nọmba ekwentị na onye kọntaktị
akụkọ m chere na ọ bụ ojoro ịjụ maka nkọwa kaadị
Na May 24, 2016 emere m mbụ na nke ikpeazụ m zụtara na miscota. Mgbe m hụrụ kwuputara na weebụsaịtị ha na enyere iwu na 24/72/XNUMX, anaghị m elele ụbọchị nnyefe ha mere atụmatụ ha gwara m.
Mgbe ihe karịrị otu izu gasịrị, na June 1, ekpebiri m ịkagbu iwu ahụ na-ezigabeghị, na-agbaso ntuzi aka nke ha onwe ha kwupụtara na weebụsaịtị ha.M ihe izizi juru m anya n'ụzọ ha si arụ ọrụ bụ nzaghachi m natara banyere arịrịọ m ịkagbu iwu.
Anyị na-agwa gị na usoro gị dị na "ọnọdụ nkwadebe".
N'oge a ọ gaghị ekwe omume ịkagbu iwu gị ebe ọ bụ na anyị amalitela ijikwa mbupu gị.
Deliverybọchị nnyefe nke usoro gị bụ maka:
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, anyị na-echetara gị na ị ga-enwe ụbọchị kalenda 14 iji weghachi ngwaahịa ndị ịzụtara site na mgbe ị nwetara nnyefe gị.
Anyị na-adị gị n’aka maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ndị ọzọ.
Daalụ maka ịkpọtụrụ Miscota.
Nke ahụ bụ ịsị na mgbe ha kwuputara na webụsaịtị ha, "Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ngwaahịa nke ezigabeghị, anyị ga-aga n'ihu ịkwụghachi ego nke ngwaahịa a na-enweghị mgbakwunye ọzọ", ha na-agha ụgha / na-aghọ aghụghọ n'ihi na ha ejeghị ije n'ụzọ ahụ.
N'ihi ya, amalitere m ịnata ego m site na paypal, na-enwe olileanya na a ga-edozi ya n'udo, na-eji eziokwu ahụ bụ na ngwaahịa ndị a zụrụ ezitebeghị na n'ụzọ ọ bụla ha enweghị ike isi nweta ihe ọ bụla n'aka m.
Ọzọ, ha tụrụ m n'anya n'echi ya, June 2, mgbe m natara email na 22: 55 pm na-ekwu na ha ga-ezitere m iwu m na ha ga-akwụghachi m € 13,40 maka paypal maka ngwaahịa abụọ na ha ezigaghị m.
Ha na-agwa m na ụbọchị ahụ e doziri bụ Monday, June 6, 2016.
N'otu Monday ahụ, June 6, m na-elele usoro nke usoro ahụ wee hụ na Fraịde, June 3, ha gbalịrị ị nyefee iwu ahụ, mana ka anyị anaghị atụ anya ya, anyị anọghị na adreesị ahụ ya mere 1 gbalịrị mbọ a gụrụ.
M na-elele iwu mbupu gị iji hụ otu esi aga n'ihu mgbe m natabeghị ngwaahịa ahụ, na-eche na m ga-enwe nsogbu na ha ọzọ.
Ọzọkwa, ọ dị m ka ụlọ ọrụ a ghọgburu m, nke na-anaghị eme ihe ha na-egosi na weebụsaịtị ha, n'ihi na mbọ 3 anaghị eme nke ọma iji nyefee iwu ahụ, yabụ ana m erite uru mgbe ha chọrọ ịkpọtụrụ m maka ngwugwu ahụ nyefere n'ihi ihe nke m, nke bụ onye enyela iwu ịjụ Mbupu na nloghachi sochirinụ. Ọ bụrụla BILUA E-COMMERCE rịọrọ nloghachi nke iwu ahụ, ka ha wee ghara ịkatọ ihe ndị ọzọ wee kwụọ m ụgwọ ndị sitere na mbupu na nloghachi nke ngwugwu ahụ. Onweghi oge m rịọrọ maka nloghachi ahụ, otu oge emere, enweghị m nzuzu iji kwụọ ụgwọ maka mbupu, ọ masịrị m ịnata ngwaahịa ahụ ọbụlagodi na ọ bịaghị n'oge ma ọ dị njọ.
Ha bụ ndị aghụghọ ma yabụ na ndị ahịa a dị egwu, ihe ha rụpụtara bụ naanị imepụta aha ọjọọ, n'ezie ndị na-a sucụ mmiri ọ bụla ga-adị ka m ndị na-adabaghị maka ịlele echiche nke weebụsaịtị ndị a.
Site na echiche 101 naanị kpakpando 2 na naanị 37% dị mma.
Adịghị ịzụta n'aka ụlọ ọrụ BILUA ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọghị ịga ala mmụọ, nke mbụ ịnwa ịkpọ ha, ana m agba gị ume ka ị gbalịa ... Ọ gaghị ekwe omume.
Zaghachi ka ị na scafadoxbilua
Ndewo, ihe niile dị mma ruo mgbe ị ga-alaghachi. Enweghị ike ịkpọtụrụ ha. Enweghị nọmba ekwentị ma ha na-ekwu maka ụdị kọntaktị na-apụtaghị ebe ọ bụla na ibe ahụ
Eso m na agugo, o yikwara ka ojoro
Dị ka m maara, ha abụghị aghụghọ, ha dị adị ma na-arụ ọrụ. Nsogbu ha bụ na ha nwere echiche nke ire ere n'ịntanetị, na-etinye ọnụ ala dị ọnụ ala na ahịa, ọbụlagodi na-efu mgbe ụfọdụ. N'ọtụtụ ọnọdụ ha na-arụ ọrụ na arịrịọ, ya bụ, na-enweghị ngwaahịa, yana ụfọdụ ndị nrụpụta amalitela obere ike gwụrụ ha n'ihi nsogbu ndị ha na ndị ọzọ na-ekesa. Okwu banyere ndị ahịa nwere ọ dị njọ, ịghara ịsị na ọ bụ ọdachi. Dị ka amaara ya (Ana m ebi n'obodo ebe ha nọrọ ruo ọnwa ole na ole gara aga), kemgbe e kere ha afọ atọ gara aga, ha agbanweela ndị nwe ha ugboro 3 wee chịkọta ọtụtụ ego site na mfu. Ya mere echeghị m na ha ga-akwụsị nke ọma, ma ọ bụrụhaala na ha ajụ, ha ga-akụ ọtụtụ ndị pere mpe.
Francisco abụghị eziokwu ihe ị na-ekwu na m bi na Mataró na ezigbo enyi m arụ ọrụ ebe ahụ kemgbe ha malitere na ha agbanwebeghị nwe. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-eto eto ma ọ na-eto eto. E nwere ike ịbụ na-mere ma ha mere ka m na-eche ma ọ bụ anapụta ihe na-ezighị ezi na Amazon kwa
scammed xbiluba dijo
Ee, mana m zụtara ọtụtụ na amazon na ịntanetị, na China, na Germany, wdg ... Ma mgbe ị nwere nsogbu, ị ziga email, ị kpọọ ma ha dozie nsogbu ahụ, ha nyeghachi gị ego gị, oge .
Ọ bụrụ na ị gụọ okwu m n’elu ị ga-ahụ na ha bụ ndị SCAMMERS, ndị ohi e-commerce na-anwa iduhie, yabụ nye ezigbo enyi gị ndụmọdụ ma hapụ ụlọ ọrụ ga-anwụ ma ọ bụrụ na ọ ga-aga n’ihu wayo ọtụtụ mmadụ.
naanị ị ga-ele anya n'echiche nke ciao na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Ndo, ndị anyị zụtara ọtụtụ ihe n'ịntanetị achọghị ka ụdị peeji ndị a dịrị nke ga-eme ka ntụkwasị obi ndị na-azụ ahịa oge mbụ ghara ịdị!
Zaghachi ka scafadoxbiluba
Alicia bolivar dijo
Ehee? Mariangeles, ị nwere ike ịjụ enyi gị ka m ga-esi kpọtụrụ ha?
Zaghachi Alicia Bolivar
Anọ m na-etinye iwu na ha maka afọ 2 na ihe niile agaala nke ọma. Ndị mmadụ na-eme mkpesa n'ihi na ha anaghị agụ ụdị dị mfe iji kpọtụrụ ha ma ha chọrọ ọrụ zuru oke na ọnụ ala, mana ọ naghị arụ ọrụ otu ahụ! Nweghị ike ịhọrọ Ryanair ma jụọ maka ọrụ ikuku ikuku! Ndewo ndị mmadụ… chọta onwe unu!
Alejandro, mgbe ịchọtara, ọbụlagodi na ọ bụ, ụdị ịkpọtụrụ ha, gwa m. Enweghị ekwentị, enweghị ụdị, enweghị ozi, ma ọ bụ ihe ọ bụla!
Maria A. dijo
Damdị mmetọ ahụ agaghị abara gị uru ọ bụla, o were m ogologo oge iji chọta ya, mgbe ahụ achọtara m e-mail iji degara ya, ọ bụ site na ndị otu bilua, mana ha azabeghị m . Ọ bụ ihe ihere, ha na-akpọsa ngwaahịa na enweghị ha, ọ bụ ihe ihere na ha na-aga n'ihu ire ma debe ego anyị
Zaghachi Maria A
Anaghị m ahọrọ Ryanair na achọrọ m ọrụ ikuku ikuku, echere m na anyị nọ ebe dị anya, ihe adịghị njọ bụ na ị ịtụ ngwaahịa, ọ gwụla, kagbuo ya ma ha alaghachighị ego gị, kedụ ebe a hụrụ ????, ha bụkwa ndị kwetara ịkagbu ya ma nyeghachi m ego ahụ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla. Emejupụtala m fọm ahụ ọtụtụ oge ma na mbido ha kwụrụ m, mgbe m bidoro ịrịọ ego ahụ ọzọ ha kwụsịrị ịza.
Ọ bụrụ n’ịzụta na Ryanair na mgbe ị rutere n’ọnụ ụzọ mbata ha agaghị ekwe ka ị banye ụgbọ elu, ọ bụrụ na ị jụọ maka nkọwa ha enyeghị gị, ọ bụrụ na ha sụọ ụzọ n’ihu gị, mgbe ahụ ka m ghọtara ọnọdụ gị , ma ọ bụrụ na ị na-enye ọrụ ma ọ bụghị give na-enye ya, mgbe ahụ, ị ​​na-aghọ aghụghọ ndị mmadụ, ịzụta nri maka afọ 2 nwere ike ọ gaghị akpata nsogbu, mana mgbe ị zụrụ ndị na-a specialụ mmanya pụrụ iche, eriri na-adịghị achọ nnukwu, pipettes si ụdị ọzọ na-abụghị scalibur , wdg ... Ha anaghị ezitere gị ngwaahịa ahụ na Ha na-egwu mop iji chịkọta gị, yabụ ndị ohi a nwere aha, nke bụ SCAMMERS.
O di nwute, azụrụ m PAYPAL ma ha agwala m na iwu ndị na-ere ere enweghị uru ọ bụla na ha, na ọ bụ PAYPAL na-edobe iwu ahụ ma enwere m ike ijide n'aka na ha ga-akwụghachi ego m niile.
Iru uju, ndi nwem. Ọ dị njọ na ọ gwaghị m tupu ọrụ nke ụlọ ọrụ ọnlaịnụ ya. Mgbe m nyesịrị iwu na July 27, 2015, na mgbe anyị gbalịsịrị ịkpọtụrụ CARETHY, (rịba ama maka ndị na-ahụ maka ịntanetị: Thezọ m ga - esi kpọtụrụ CARETHY bụ site na ibe FACEEBOK ma hapụ iwu m. Ma ọ bụ ndenye aha ya) maka ndị ọzọ , enweghị ekwentị, ozi ịntanetị bulie ha, iwu anaghị abịa !!! ỌR !!! !!! Bido na nke taa bụ Septemba 2, 2015 M ka na-eche, ha alọghachighi ego m !! Kpọsaa ụlọ ọrụ dị egwu site na netwọkụ, mepụta FAMA wee "hie ụra" na-efu ndị ọrụ na ndidi. Ọfọn, dịka netwọkụ ozi na ọkwa ma ọ bụ karịa na-ejikwa otu ndị ọrụ ahụ, lee, anyị bụ, ndị isi nke Carethy, iji nye gị AMEB thatR that na ị kwesịrị ma na-eke, NA-AGHAGH C NDUS CB whoTA na-azụta ngwaahịa gị. Arịrịọ m ndị ọrụ nwere nke ha, nọmba ekwentị, email, wdg, bipụta ha. Daalụ.
PS: Kupọns ego bụ ihe egwuregwu.
Ọ bụ ojoro, m na otu ihe ahụ, echere m otu ọnwa na ihe ọ bụla, ha azaghịkwa ozi ịntanetị, ihe yiri m ihe ihere bụ na ịbụ ọtụtụ ndị emetụtara m ịntanetị, ibe ahụ ka na-arụ ọrụ.
Mgbe m kwusiri ike, m ga-ekwu na akpachapụrụ anya weghachite ego m. Agbanyeghị, mgbe m nwetachara ihe m, echeghị m na m ga-azụta na ibe a ọzọ. Ọnwụ, dị arọ ruo mgbe ha ga-enyeghachi gị ya
Vicente calatayud juan dijo
Vicente, kedu ka m ga-esi nweta Karethy malite na 16-10 ruo 15?
Nzaghachi na vicente calatayud juan
Otu ihe ị na-ekwu na-eme m, ha enweghị ike ịkọwapụta, enweghị ngwaahịa, ha kagburu ma ghara ịlaghachi ego ahụ ma ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ụyọkọ ndị a.
Otu ihe a na-eme m, m nyere iwu na Ọktọba 5 ma ụbọchị ole na ole gachara m zigara ha email maka na ọ bịarutebeghị. Ha gwara m na ha enweghị ngwaahịa ma ha nyere m ngwaahịa dị iche, ekwuru m mba na ha ga-akwụghachi m ego m, m ka na-echekwa
Zaghachi ka Roro
Ahụm m na Biuky na-adị njọ !!!
Edebela m iwu maka € 250 ma ọ bịarute (ana m echere ya izu 3). Na mbu, ha azaghachila email, mana ụbọchị ahụ ebutere ezughi oke ... Mgbe m malitere idegara ha akwụkwọ nke ọma, ọbụlagodi ịgwa ha na m ga-agba akwụkwọ na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha emeghị zitere m iwu m ma ọ bụ M Ha weghachiri ego m, ha akwụsịla ịza ... na ọ dịghị onye na-akpọ m, n'agbanyeghị na ha nwere nọmba ekwentị m na faịlụ ahụ!
Companylọ ọrụ a bụ ojoro na ha na-eme m ahụhụ na ọnwụ nke ego m na-ezube ime ka a mara na netwọkụ niile, na-agbagha ya.
Omume a na mmebi ntụkwasị obi nke onye ahịa bụ ihe ihere.
Ezi ụtụtụ, enwere m iwu na-echere inweta n'aka CARETHY, na enwetaghị m ihe ọ bụla, ọ na-esi isi ojo, onye maara ka esi akpọtụrụ ha, ekwentị, sms, email ... daalụ.
Amaghị m ma m ga-eri oriri nke kansụl obodo m ma ọ bụ ịpụta na ndị nnọchi anya Generalitat nke Catalonia na Madrid. Anyị ekwesịghị idozi maka ịza ajụjụ ebe a. Nke a ga - adụ firecracker ma ego na ngwaahịa ga - agwụ anyị. Echi ha gbanwere aha anyị ga-aga n'ihu na-egbutu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otu esi akpọtụrụ Albert Costa García, gwa anyị.
Ọfọn, ọ dị m ka ọ na-egbu m, otu ihe ahụ mere m, enwere m ọnwa na-esite na m esighi na Portugal na ọ bụ oge mbụ ọ na-eme m, ike gwụrụ m ịkpọ oku ka m nweta azịza ya na enweghị ihe ọ bụla maka na ekwentị anaghị aza bụ enweghị nsọpụrụ maka ego ọ naghị ada site na mbara igwe ị ga-arụ ọrụ.
Echere m na nsogbu nke ụlọ ọrụ a bụ na ha na-eji obere ndị ọrụ na-agba ya ma ha na-agbada, m na-agwa ha okwu mgbe ụfọdụ ma ha dị ka ezigbo ndị mmadụ, yabụ m ga-akọwa ha dị ka onye na-ahazi aha ma ọ bụghị ndị aghụghọ n'ihi na n'ikpeazụ ha kwụsịrị elu na-eziga ngwaahịa. Ọ bụrụ n’achọghị ka nke ahụ mee gị, ị ga-akwụ ụgwọ na PayPal na mgbe ike gwụrụ gị ichere, kwuo PayPal ha ga-akwụghachi ego gị.
Zaghachi José Ramón
Mary AV dijo
Biko, gwa anyị otu ị siri jisie ike ịgwa ha okwu n'ihi na akpọrọ m 15 na ekwentị ndị ọzọ na-abịa na ịntanetị ụbọchị iri na ise ka ha nwee ike kparịta ụka ọ bụghị site na ozi ha na-aza mgbe ha chọrọ ma enweghị m ike . Achọrọ m inye ha votu nke obi ike mana oge ọ bụla m hụrụ ọtụtụ echiche, olileanya m na-ahapụ m. Ha zipụrụ m ọkara nke iwu ahụ ma boo m okpukpu abụọ. Ikpeazụ ngwọta ha nyere m bụ na ha ga-nkwụghachi ego nke ngwaahịa na-abịarute na ego ego ego ego na dị ka ị ga-aghọta, Agaghị m eme ọzọ ịzụrụ. N'ikpeazụ, m ga-ekwu ihe ahụ site na paypal
Zaghachi Maria AV
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị, kwuo site na PayPal ma ha ga-akwụ gị akụkụ ahụ ezitebeghị na akaụntụ PayPal gị. Enweghị nọmba ekwentị ọzọ, ọ bụ ihe gbasara ịnwale n'oge dị iche iche ma nwee ihu ọma inweta ya.
Zaghachi José Ramón.
Spain nke ohere mana maka ndị na-enweghị isi dịka ndị a kwenyere na ndị ọrụ ahụ nzuzu.Mụ na Paypal agwala m nkeji ole na ole gara aga: ha gwara m na ha dị, ha enweghị nkwupụta ọ bụla emeghe ugbu a nakwa na ha nyere Echere m na enwere ike ịlaghachi azụ ma ọ bụrụ na enwetaghị m isiokwu ahụ. Echere m na ekwesighi ka ụlọ ọrụ kwe ka onye ahịa na-enweghị onye ahịa na-arụ ọrụ !!!, Ekwentị m nwere bụ 933967172 wee pịa 4-digit. Mgbatị iji hụ ma ha jidere ya.
Taa Jenụwarị 4, 2016, anatabeghị arịrịọ m mere Carethy site na mbufe, maka euro 107,30. Onye ọ bụla kwuru na ha nyere ezigbo ọrụ na-agha ụgha, ọ ga-abụrịrị otu n’ime ha. Emere m iwu ahụ na Nọvemba 4, 2015. Ha na-ekwu ugboro ugboro na enyebeghị ha ngwaahịa ahụ, Carqueja, (Akwukwo nri Feu). A gwala m ha ka ha zitere m ihe ọ bụla ha chọrọ ma ọ bụghị. Ọ bụrụ na ndị Carethy gụọ nke a, onye m gwara na m ga-ekwu ya na ọgbakọ niile m jidere ruo mgbe ha laghachiri nke m, m ga-ekwupụta ya ebe m nwere ike, ana m agwa ha nọmba iwu m: PHA-ES- 1511041246458. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịdụ m ọdụ ihe m nwere ike ịme, ana m arịọ ha ka ha gwa m, na ibe a. Daalụ
Nke a na - eme gị maka ịghara iji ọrụ Paypal. Enyere m iwu na ha na Disemba 11, enwetabeghị m ya na 24th, m kpọtụrụ ha site na ibe ha na-arịọ maka ozi ka ha wee gwa m ogologo oge m ga-echere ịnata iwu ahụ, na-echetara ha na mbụ Ekwesịrị m ịpụ na Paypal iji nweta nkwụghachi nke ego akwụ ụgwọ, ha weghachiri m ego ahụ ozugbo. Nsogbu ndi mmadu a nwere bu na oburu na ha enweghi ahia ha hapuru gi ijide rue mgbe ebighi ebi na emeghi ihe otu ahu. Ma ịghọ aghụghọ ule adịghị aghọgbu onye ọ bụla, ha bụ ntakịrị nzuzu. Ugbu a, m na-eche iwu ọhụrụ site n'aka Carethy na nwayọ, ọ bụrụ na ike gwụrụ m ichere, m na-arịọ ha ka ha kagbuo iwu ahụ ma ọ bụrụ na ha eleghara m anya, m na-emeghe esemokwu na Paypal.
Okwu gị bụ ABSURD, nzuzu onye ọ bụla nke na-ekwu na iwu ahụ rutere 24/72 awa na dị ka gị ma ọ bụrụ na ha enweghị ngwaahịa ha na-ahapụ gị na-eche ebighebi? Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị, ị na-agakwuru ndị ọzọ iji dozie ya?
N'ezie, enwere ndị mmadụ maka ihe niile ...
Azụrụ m ọnwa 3 gara aga ọ dị n'ọnọdụ dị njọ na m ga-eweghachi ya na ọnwa 3 enwetabeghị m ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ego m zigara. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị kachasị njọ, enwebeghị m ụlọ ọrụ ọzọ, enweghị ekwentị iji kpọtụrụ naanị site na ozi ịntanetị ma ha anaghị akpọ gị.
Abụ m onye ọrụ nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na enwebeghị m nsogbu ọ bụla na azụrụ m ihe niile. Peeji a, MISCOTA, bu nke anaghi ezighi ezi, nke m na azughi. Ọ karịala ụbọchị iri na ise kemgbe m tinyere iwu na mgbe m jụrụ banyere ọkwa ya (n'ihi na ụbọchị nnyefe ha chere na ọ gafeela ụbọchị 15 gara aga) ana m anata otu azịza ahụ, na "taa ọ ga-ahapụ ụlọ nkwakọba ihe anyị … .. ". Agbalịrị m ịkagbu iwu ahụ wee nweta ego ma ọ gaghị ekwe omume n'ihi na "taa ọ ga-ahapụ ụlọ nkwakọba ihe anyị ...". Ọ bụghị ajụjụ nke ịghara iji Paypal Ramón, ma ọ bụ chọọ ọrụ dị ebube na ọnụ ala, ọ bụ maka ịnweta ihe ha na-ekwu, n'oge kwesịrị ekwesị, na ọnọdụ dị mma. Kwesighi idozi maka ihe ha nyere gị iji kwụọ ọnụ ala. O doro anya na ha na-aghọ aghụghọ ule, na otutu. Kedu ihe ọ gbasara ha? Ọfọn, ọ dịghị, ebe ha nọ, nke ahụ bụ otu o si aga. Na ihe abụghị ida ahịa.
Ehihie ọma! Ahụmịhe m abaghị uru ịgwa ya, ọ jọgburu onwe ya ma anaghị m akwado onye ọ bụla ịga zụọ ahịa ha na ụlọ ahịa a. Maka ozi ana m ahapụrụ gị ndọtị maka ọrụ ndị ahịa n ° 122.
Banyere, Eleana A.
Zaghachi Eleana BA
Anọ m na-azọrọ iwu m ma ọ bụ ego m kemgbe 2015 ma ọ bịaghị. Miscota bụ ojoro. Ha na-agwa m na ha etinyewo ego na akaụntụ na-abụghị akụ m ma ha jụrụ idozi ya. OZI KWES ONLR ONL KWESINERINE INELỌ INT INTA M NA Ndụ M !!! Ezigbo ọrụ !!!
Ha kagburu iwu m n'ihi na akara ahụ adịghị ewe ngwa ngwa wee weghachite ego m n'ime ụbọchị iri na anọ dịka ha gwara m ... amaghị m, enyi m na-azụta ha mgbe niile ma na-atụ aro ụlọ ahịa a n'ihi na ọ nweghị nsogbu ọ bụla.
Ihe ị na-ekwu bụ ụgha, ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na onye si BILUA agbaa ọsọ zoro ezo na ozi dị mma, anọ m na-agba mbọ ka mụ na ha gbasaa maka izu 1, uche ha dịkwa egwu.
Mgbe ichere maka ngwaahịa ogologo oge o were iji rute ma mgbe ichere naanị ụbọchị 14 ... Nkwubi okwu gị bụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma. Ọfọn, ọmarịcha. Nọgide na-agbalị ihu ọma gị ma zụta ọzọ. N'ezie, ị ga-enweta ngwaahịa gị? O doro anya na ọtụtụ okwu ọjọọ agaghị abụ na a ga-atụpụrụ ha na ntị chiri. Enyewo m ụlọ ọrụ iwu na withntanetị na ndepụta ahụ, echere m na ọ ga-abụrịrị dị ọnụ ala karịa ha na ọdịiche nke ịnata ya na ụbọchị ole na ole. Ọ bụghị iberibe m na-ekwughachi ha. Otu na-enweghị mmasị.
Jisie ike… ..Mere iwu m natara ngwaahịa na ọnọdụ dara ogbenye ma ihe dị ka ọnwa isii ha meere m ya It .. Ọ bụ ihe ụmụaka m weghachiri ya ma ha zitere m onye ọzọ na ọnwa isii na mgbe ọ baara m uru Ọ dịghị ma ọlị. ụlọ ọrụ ngere kacha njọ n'ịzụ ihe nke ndụ m na-azụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị n'ịntanetị ma enwebeghị m nsogbu ọ bụla ma e wezụga ụlọ ọrụ a. Agaghị m azụ ọzọ ụlọ ọrụ a.
A na-akpọsa nọmba ahụ na ụmụ faịlụ ngwaahịa .. akpọrọ m ha ma ha dị ka ọ dị mma. nsogbu edozi na nkeji abuo! Aga m anọgide na-azụta n'aka ha
Zaghachi Maria del Carmen
A) Ee? Gịnị bụ ekwentị? Gini mere ị gaghị etinye ya? Ọ bụ 93xxxx? Na nke ahụ ị nwetara mpaghara na ọ bụrụ na ị maghị mgbatị ọ kwụgidere, kedụ ndọtị ọ bụ? Ọtụtụ ndị ọrụ maka BILUA gbara gburu gburu ebe a, na-agba mbọ iwulite ntụkwasị obi NOT A tụkwaghị ha obi, efu !!
Louis mara dijo
Akpọrọ m nọmba na-egosi na faịlụ nke ngwaahịa ọ bụla ma ha edozi ihe merenụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ngwaahịa nke mebiri emebi. Ha ga-eburu m ngwaahịa ahụ ma zitere m nke ọhụrụ. Agwawo m Cristina na ọ na-adị ngwa ngwa. Aga m enye gị obi ike
Zaghachi Luis maria
Site na ndahie Maria (del Carmen) na (Luis) Maria kwenyere na okwu ha di otu. Kedu ihe ọ bụ gbasara ilele faịlụ ngwaahịa? Na ibe weebụ obula I choro ikpotara, pinye aka na kọntaktị ma ha nye gi akara ekwenti, etinyekwala ndi oru BILUA ozo, amara gi adabakwara na ala, bulie ya site na oru nke oma na oru na oru adighi eduhie ndi mmadu! !
Ahụmahụ m na ha dị ezigbo mma. Azụrụ m ọtụtụ oge ma nata usoro m mgbe niile. The oge na m nwere nsogbu m na-akpọ na nọmba ekwentị na e depụtara na faịlụ na ha dozie ya ngwa ngwa. Aga m anọgide na-azụ ahịa.
hahaha !! Tab ekwentị? Na ibe weebụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ, pịa na kọntaktị ma ha nye gị nọmba ekwentị, etinyela ọtụtụ ndị ọrụ BILUA, ewu ewu gị adịlarị na ala, bulie ya site n'ịrụ ọrụ nke ọma na ọkachamara na mgbalị adịghị eduhie ndị mmadụ !!
Achọpụtachaghị nke ọma. Ha na-agbaso ntuziaka nke ihe agaghị eme na ire ere n'ịntanetị.
M nyere iwu site na nlekọta (otu ọnwa na ọkara gara aga) ihe dị ka 35, na-eche 1 MONTH iji nata a .nke ezighi ezi (obughi ọkara) nke ihe m zụtara.
N'ikpeazụ, mgbe ha jụsịrị mgbe ha na-eme atụmatụ iziga m ihe ndị ọzọ, ha gwara m na ha kagburu usoro ndị ọzọ n'ihi enweghị ngwaahịa ...
Ugbu a ichere ihe dịka ụbọchị iri na ise iji nata ego akwụ ụgwọ maka ọkara nke ihe na-efu.
Enweghị ekwentị ịkpọtụrụ, echere m na ọ doro anya ...
N'ọnọdụ ọ bụla, na enyemaka ya dịka Miscota na ndị ọzọ enweghị ekwentị na oge nnyefe bụ ụbọchị 10 ruo 15. Inweta azụmaahịa a dị ọnụ ala, mana ọ dị nwayọ (ma ọ bụrụ na ọ bịarutere) ma ị na-ekpugherekwa onwe gị na nrụpụta ngwaahịa mgbe niile, iwe na oge furu efu ịkpọtụrụ site na tiketi (yana nchere ha kwekọrọ na awa 48) Ọ bụghị oku ekwentị dị mwute iji rịọ mgbaghara ma ọ bụ kwuo banyere ya n'onwe. Onweghị ihe ọ bụla ... ọ bụ ezie na m na-agụ echiche ndị ọzọ, ahụrụ m na nke m abụghị ihe ọzọ, mana ọ na-emekarị.
Agbanyeghị, anaghị m akwado ya, enwere nhọrọ ka mma n'ịntanetị na ọnụahịa.
Ndị a ga-emikpu ngwa ngwa ...
Ọ bụ eziokwu na iwu na-ewe ntakịrị mana mgbe ọ bụla m zụtara ha rutere, m ga-enwe ndidi na ha, ha nwere ọnụ ala dị ala karịa mgbe ị nyere iwu, ị ga-eme ya tupu oge eruo
Ọ bụrụ na ọ ga-ewe ha ịghara ịsị na iwu ahụ batara na 24/72 awa, nri? Nwee ndidi? Ọ bụrụ na m zụta inwe ya na 24/72 awa, ọ bụghị ichere otu izu na ihe na-erughị otu ọnwa dị ka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-ekwu ...
Ejila aghụghọ dijo
Iwu Nchekwa Ndị Ahịa (http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf) na-eme ka o doo anya. Oge nnyefe kachasị maka usoro bụ ụbọchị 30. Okwu kachasị iji weghachite ego bụ ụbọchị iri na anọ.
Enwere ike ịghọta oge ezumike ngwaahịa. Mana ịdabere n'ụdị azụmaahịa gị n'inye ngwaahịa ndị ị nweghị ike inweta bụ ojoro. Enwere ndị ọrụ aghụghọ aghụghọ zuru oke maka imekọ ihe ọnụ, nke ọ bụla ikpe anaghị m aghọta etu ndị nchịkwa anaghị eme ya.
Zaghachi na ojoro NoOsDejeis
Ọ bụ ojoro, ụmụaka, ha anaghị edozi ihe ọ bụla, ha na-eziga ihe ha chọrọ mgbe ha chọrọ ma ha azaghị azịza ndị a na-ekwu, enwebeghị m ahụmịhe ọjọọ dị otu a na ibe weebụ, m ga-akọkwa ya.
Naanị ile anya na ị nwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ọnụahịa yiri nke a. Okwesighi ka ekwenyeghi ma iwu a ga-abata, ma ọ ga-ezu oke ma ọ bụ mgbe ọ ga-abata. O di nwute na enwerem "ndidi" nke ufodu choro na n'ihi na enweghi m aka, ma odighi. Anyị bụ ndị ahịa ma ọ dị ike anyị ịchọ ogo site na ọrụ. Dịka onye ahịa, ekpebiri m ịghara ịzụrụ ọzọ n'aka ụlọ ọrụ gosipụtara m enweghị oke. Ha ga-ahụ ma ha ga-achọ ịla n’ihu. Achọghịzi m ịma n’ihi na ọ bụrụgodị na ha emezie ihe m tụkwasịrị m obi, atụkwasịghị m ha obi.
Olileanya Lopez dijo
Bad, bad, bad ... Agaghị m azụ ọzọ. Ọ dị m ka ya bụrụ na m chịkọtara ozi na ịntanetị tupu ịzụta. Maazị Albert Costa, biko gụọ nyocha ma meghachi omume.
Zaghachi Esperanza López
Bilua otu dijo
Nwere ike ịgwa anyị ọnụọgụ iwu gị ka onye ọrụ anyị wee nwee ike ịchọpụta ụdị ihe ahụ mere wee nye gị azịza ọsọ ọsọ?
Anyị na-echetakwara gị na ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị na ekwentị na nọmba efu bụ 932 20 06 33 (Mọnde ruo Fraịdee site na 10am ruo 12:30 pm na 15:30 pm ruo 17pm)
Zaghachi Bilua Team
Alicia bol dijo
Ndewo, achọrọ m ka ị gwa m mgbe m ga-anata usoro m, ọ bụ maka onyinye na enweghị m ụzọ m ga-esi kpọtụrụ ma ọ bụ mara ebe ọ dị, daalụ.
Biko, ekwentị na-ezo aka na weebụ yana weebụ ọ bụla. Ọ ga-amasị m inwe ntụkwasị obi na gị
iwu m: bei-es-1611072148215
Zaghachi Alicia Bol
Kpọmkwem ọrụ ndị ahịa bụ 932200633. Ee, ọ gbagwojuru m ọtụtụ. Agbanyeghị, ndị ọrụ gị nwere ezigbo ọyị. Echere, iwu m gara taa. Ha kwugidere m ya. Anyị ga-ahụ. Ya gaziere onye obula !! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndụmọdụ m bụ isonye na ikpe klas iji kwụsị mkparị ndị a ịga n'ihu.
Ndewo, aha m bụ Jose
Enyere m iwu na BILUA COMMERCE ma ọ bụ MISCOTA na July 4 ma kwụọ ụgwọ mbupu iji nweta ya elekere 24 ma m ka na-eche ma anyị nọ na July 14 ma ha zitere m email ịnata ya na July 11 ma ọ nweghị ihe ruru, ụlọ ọrụ a bụ ihe ọ bụla na-akpata na ha enweghị Tef na-azọrọ, mgbe ị na-akpọ ha na-agwa gị ka izipu ya site na web mail! Agaghị m azụ ọzọ na ụlọ ọrụ a BILUA COMMERCE SL ma ọ bụ MISCOTA B IM IMB IMRPR PRBESRENT NA-B ANDGH AND RB RR ALL ALLBANY!! Aga m agbali ịgbasa nke a na ibe niile m nwere ike ka ndị mmadụ wee gụọ ya
Ana na dijo
Onweghị ihe ọ bụla, o doro anya na anyị abụrụla aghụghọ. Modus operandi bu otu. Ọ dịghị onye na-anata iwu gị na ihe mbụ ha mere bụ ịnakọta ya. N'okwu m euro 67. Achọrọ m igosipụta onwe m ebe ahụ, ha nọ na carrer de la fisíca 2-4 de Llinars del Valles. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, m na-eche ma ọ bụrụ na ọ ka mma imefu ihe niile n'ihi na ọ bụ ego furu efu na ndị a bụrịị pasta ahụ.
Biko buru n'uche na, dị ka a kọrọ na ibe anyị, ụbọchị nnweta akara ọ bụla na-akpọsa na faịlụ nke ngwaahịa ọ bụla na weebụsaịtị anyị.
Nabata ngwaahịa a na iri abụọ
Na peeji nke ụgbọ gị ị nwere ike ịhọrọ usoro nnyefe ịchọrọ site na oge nke nnweta ngwaahịa ị họọrọ na nke kwekọrọ na ntinye anyị.
Anyị na-ewere ohere iji chetara gị ndị bụ ọwa nkwukọrịta kpọmkwem na ndị ahịa anyị:
- Nọmba ọrụ ekwentị: 932 20 06 33 (Mọnde ruo Fraịdee site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere iri na abụọ nke mgbede na site n'elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere 10:12 nke ehihe - ị chọghị mgbakwunye ọ bụla)
-Nkebi «kọntaktị» nke weebụsaịtị anyị Miscota
- Nọmba ọrụ ekwentị: 932 20 06 33 (Mọnde ruo Fraịdee site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere 10:12 nke ehihie yana site na 30:15 pm ruo 30:17 pm - ị chọghị mgbakwunye ọ bụla)
-Section "kọntaktị" nke weebụsaịtị anyị Miscota
Ndewo, ị nara m ebubo ugboro abụọ maka iwu # BEI-ES-2 ma ị kwụghachighị m ihe ahụ ị gwara m na ọ gwụla. Na kaadị m ka I bujuru ya dịka Beibiso na onye ọzọ dịka Beibito. Achọrọ m ka edozi ya ozugbo enwere ike. Daalụ
Zaghachi ka rita
N'ehihie ụnyaahụ m nyere iwu na ụlọ ọrụ ọzọ na ndepụta dị ọnụ ala ma m natara ya. Ọ bụ naanị nyocha. Na njedebe, ịzụrụ n'aka ndị a dị oke ọnụ. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha ewere ndị ọrụ ezigbo enyi ma ọ bụrụ na ha anaghị efe gị ihe ị rịọrọ maka oge egosipụtara. Na e nweghị nọmba ekwentị ịkpọtụrụ ama enyo.
Ha anaghị ezute ụbọchị ụgbọ mmiri e mere atụmatụ na iwu enweghị ike ịdebe n'ihi na ọ bụ "na nkwadebe" mgbe niile. Ka na-eche ka, na-ekele ịdị mma na e nwere paypal ikwu. Ezigbo ọhụụ. Agaghị adaba.
Ha bụ ndị na-enweghị ike ịkọwapụta, ndị aghụghọ !!! Enweghi ike ịkpọtụrụ ha, ọrụ ndị ahịa dị egwu. Biko ekwekwala ka onye obula si n’ụlọ ọrụ a zụta !! Ọ bụ wayo! Azụrụ m ihe na Kidits maka onye ahịa ma m ka na-eche, ozi ịntanetị bounce na ọ dịghị onye na-atụtụ ekwentị ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, biko gwa anyị ọnụ ọgụgụ nke iwu gị na onye ọrụ gị ga-akpọtụrụ gị iji dozie ụdị nsogbu ọ bụla. Anyị na-echetara gị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ site na ekwentị, site na Mọnde ruo Fraịdee site na 10 ruo 12: 30 na site na 15: 30 pm ruo 17 pm ruo na ọnụ ọgụgụ anaghị akwụ ụgwọ: 932 20 06 33 (ọ nweghị ndọtị dị mkpa ). I nwekwara ike idere anyị site na »kọntaktị» ngalaba nke ibe anyị ma ị ga-enweta enyemaka anyị karịa oge azụmahịa 24.
Enyere m iwu 3 izu gara aga. Ọ bịarutere ụnyaahụ. Naanị otu n'ime ngwaahịa abụọ abatala. Enwela nsogbu, enweghị akwụkwọ ọnụahịa ...
M na-agbalị ịkpọtụrụ ekwentị 933967172 na n'ezie, ọ bụrụ na ị maghị mgbatị ... chefuo ya. Achọtara m na peeji a ndọtị 112, ọ naghị arụ ọrụ ma. M na-akpọtụrụ ha site Facebook, ịrịba !! ha na-aza site n'ịsị:
iji nwee ike idozi obi abụọ gị ị ga-aga ọrụ ndị ahịa. M gafere gị njikọ ahụ kpọmkwem.
I nwekwara ike ịkpọtụrụ ha na ekwentị site na nọmba ndị a: 932200633 EXT006
Ana m akpọ n’ehihie ruo 17, abịarala m. Echi m ga-anwale ọzọ
Aga m anọgide na-agwa gị
Anyị na-agwa gị na nọmba ọrụ ekwentị anyị na-arụ ọrụ site na Mọnde ruo Fraịdee site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere iri na abụọ nke mgbede na site na elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede (ịchọghị mgbatị ọ bụla). Nọmba gọọmentị bụ: 10 12 30 15. Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ọnụahịa gị, ịnwere ike ịrịọ ya site na ngalaba "kọntaktị" nke weebụsaịtị anyị, na-enye anyị nọmba NJ gị. Ọ bụrụ n’inweela njem njem ma ọ bụ ọ bụrụ na egbuola iwu gị, biko gosi akara nzụta na onye na-ahụ maka ọrụ ga-akpọtụrụ gị iji nye gị ngwọta ọsọ ọsọ na afọ ojuju.
Ikpeazụ Friday m gwara gị banyere iwu, n'ihi na m rịọrọ ya na July 17 ka enye ya na 24/72 awa. Ka ha na-enyefeghị m ya, akpọrọ m ha, ha gbanwere m na iwu ọzọ, na-ewepụ ihe na-egbu oge ya ma ha nye m nọmba iwu ọzọ, ha gwara m na ọ bụghị karịa July 25 ọ ga-abụ na adreesị m ebe ọ bụ Aga m ezumike n'oge na-adịghị anya. Ha zitere m ozi email a:
Ga-enweta nkwenye email na nsuso nọmba mgbe ọ Ẹnam ekese.
Anyị ga-akwụ gị ụgwọ dị iche na-esi na mgbanwe a gaa na akaụntụ gị na ụbọchị 14 na-esote.
Deliverybọchị nnyefe ezubere
Shippingbọchị mbupu a tụrụ anya ya
Ruo taa, Julaị 27, anabatabeghị m iwu ahụ, ma ọ bụ email nkwenye ahụ na nọmba nsuso mgbe ọ na-apụ, yabụ echere m na ọ kabeghịkwa, mgbe ha gwara m na ha zigara ya n'otu ụbọchị ahụ. Ezitere m ha ozi dị iche iche na ntanetị wee kpọọ m ugboro 500 ma ọ nweghị onye na - eburu. Ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ gị, ọrụ ndị ahịa adịghị mma.
Biko, achọrọ m ya ugbu a n'ihi na m na-ahapụ. Nwere ike inye m azịza? Nke ahụ abụghị ịkpọ ekwentị nke ọ na-enweghị onye họpụtara, ma ọ bụ ibe weebụ nke ha na-azaghịkwa?
8 na-akpọ. Nkeji 10 na-eche kwa. Enweghị ike ịkpọtụrụ site na ekwentị. Na peeji nke otu, agaghị ekwe omume. Kedu nzọụkwụ ọzọ ??
Chere ka oge nloghachi gwụ? Kpesa?
M na-agbali idozi nsogbu ahụ, oku, ozi ịntanetị, kpọtụrụ site na facebook…. azịza gị:
Nke mbụ, anyị na-akwa ụta maka ihe mere na iwu gị.
Iji hazie ihe ahụ merenụ, ị ga-ezipụ email na incidences@bilua.com na-egosi ntughari ntughari gi.
- Foto nke nkwakọ ngwaahịa (ma ọ bụrụ na enweghi ngwaahịa na igbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iziga anyị foto nke igbe ebe ị natara iwu ahụ)
-Iyi nke barcode nke emetụtara ngwaahịa / ngwaahịa.
-Ise nke ogbe / ngafe ụbọchị
Ozugbo anatara ihe oyiyi ahụ, anyị ga-akpọtụrụ gị iji kpọtụrụ mkpebi nke ihe ahụ merenụ.
Anyị na-ekwughachi mgbaghara anyị ma anyị nwere olile anya ịga n'ihu na-atụkwasị obi na ntụkwasị obi gị.
Mbukota foto ???? ma ọ bụrụ na ọ bịara juru kechie kechie kechie !!!!
Onyonyo nke emetụtara ngwaahịa ??? Ma ọ bụrụ na otu n'ime ngwaahịa ahụ abịabeghị !!
Nke ahụ bụ azịza ya. Nke ahụ bụ, n'izu ọzọ nke ga-efu, nkwubi okwu ha ga-agwa m na nloghachi ahụ abụghị oge, echere m na na ọnụego a, m na-ere ya site na Wallapop na m ga-agwụ n'oge na-adịghị anya
Biko gwa anyị nọmba nke iwu gị iji nwee ike ịchọpụta ihe merenụ ma nye gị azịza ya
Akwụkwọ ọnụahịa ID: PHA-87047
Companylọ ọrụ kachasị njọ m hụtụrụla, etinye m iwu MIS-ES-1607182053523 na July 18 na-akwụ ụgwọ na kaadị card 140,22, ka a gafee na July 28 na August 3 na ịkwụ ụgwọ maka mbupu na 24 awa. Ka ọ na-erule August 9, amabeghị m mgbe ọ ga-abata, ọbụnadị ịgwa m site na mail na August 4 na mbupu a ka hapụ ọrụ ya. Enweghị ike ịkpọtụrụ site na ekwentị, a na-aza ozi ịntanetị n'ime awa 48 n'enyeghị gị ozi ọ bụla. Ana m agba ume ịzụrụ ihe ọ bụla n'aka ha. Kpachara anya na ebe nrụọrụ weebụ otu Bilua na karịsịa Miscota.
Zaghachi Jesús Alberto
Daniel Pazos Alvarez ihe oyiyi dijo
Na-ada oyi. B DGH imagine m were ya na enwere ike ịnwe weebụsaịtị maka ịre ahịa na obere mkpa a, ha anaghị ezute oge a ga-eme ya n'agbanyeghị na ị zara gị site na email na ọ bụrụ na enwere ngwaahịa ngwaahịa m zụtara na m. Ha kwesiri ibido na August 11 ma taa enweghi ihe obula. Ha anaghị aza ozi ịntanetị mkpesa ma ha anaghị eweghachi ego gị. Enweghị ihe ọ bụla bara uru na n'ihi na ha ezughị oge ịkwụsị iwu, ọ ga-adị mkpa ịme nkwupụta iwu na-arịọ ka emechie weebụsaịtị a ma ọ dịkarịa ala na Spain. Na mba ndị ọzọ ọ dịkwa oke njọ, naanị gaa google maka obodo ịchọrọ ịjụ na ha niile nwere otu nsogbu.
# BEI-ES-1608091554237 Nke a bụ iwu m nke m chọrọ ịkagbu n'ihi enweghị nnyefe ụmụaka.
Zaghachi Daniel Pazos Alvarez
***** ANYING GA-AKỌRỌ G YOU, M KWES ORR AN IWU NA Usoro NA-AGA N'IHU, ANA M AH, NA Ọ BSR TO ỌT PEOPLET PEOPLE ND PEOPLE KWES ,R AG, ANY AG NA-EZE NA NETWORK NA-EME NT JTA NT ++TA +++++++ + + Azụghị ihe ọ bụla na ụlọ ahịa a dị na ntanetị, Ọ B IFR IF na ị nwere nhọrọ iji kwụsị ya n’oge ha anaghị eme ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịlaghachi ihe ị ga-akwụ, na mgbakwunye na ihe ọ na-ewe iji zitere gị Ngwaahịa, ha adịghị kwa eme ọ bụla banyere ozi na ha na-zigara ha ma ọ bụ ebe a abụghị PAGE gị *** NOOOO COMPREISSSSSSSSSS *****
Gaa na peeji Facebook ha ma gbakwunye akwụkwọ mkpesa ahụ, ha ga-egbochi gị ọzọ ma ọ bụ ezie na ha na-akwado gị, ha bụ ndị aghụghọ.
*** Azụchaghị ihe ọ bụla site na nlezianya *** BANYERE ndị enyi gị, ha akpọchiela enyi n'ihi na ha na-etinye ozi na ebe a na-ekwupụta ụlọ ọrụ a, Biko B BGH B ịzụta, tinye METEOS IWU NA LEE ND WHO NA-ECHERE IWU. http://www.actualidadecommerce.com/bilua-grupo-especializado-en-venta-online-de-productos-de-familia-preve-facturar-10-millones-de-euros-en-2014/#comment-327
***** Ha B THE Otu BILUA NA-AKW CKWỌ AKW ***KWỌ *** METEOS NA OSLỌ, Ha na-echekwa ụsọ oké osimiri anyị, ezipụla ngwaahịa
Ndewo Clara, ị nwere ike ịmatakwu m gbasara mkpesa ahụ? Ọ ga-amasị m isonye.
Ha bụ ndị wayo. Etinyere m iwu m na mbupu ngwa ngwa 24 h / € 7.99 na-azụ nri dị iche iche na nri akụrụ mmiri maka nkịta m na-arịa ọrịa na ụbọchị ise ka e mesịrị iwu ahụ dị na ngwaahịa, agwara m ha na achọghịzi m ya n'ihi na ha ezuteghị oge nyefe ha ma ha azaghị m. Ezitere m ozi ịntanetị asaa na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na ibe ha ka ha wee laghachi ma kwụọ m ụgwọ ebubo na akaụntụ ahụ naanị m natara ozi ịntanetị site na "iwu gị na-aga n'ihu" ruo ụbọchị iri na abụọ ka nke ahụ gasịrị ha kpọrọ m site na mail iji nye iwu, m na-akọwa ihe mere m na ihe kpatara na achọghị m ya, na ihe bụụrụ m ihe ijuanya mgbe nwoke ahụ gwara m na ọ bụ onye ahịa nke atọ kwuru otu ihe gbasara ụlọ ọrụ ahụ rue izu a. Nke kachasị njọ bụ na taa enwetara m ozi email site na bilua na-ekwu na enweghị ike ịnye iwu m n'ihi na m "anọghị" yana akpọtụrụ m na post ọfịs ka m were ya (ha enyeghị m nọmba ekwentị ịkpọtụrụ) Edere m ka m gwa ha ọzọ na ha bụ ndị aghụghọ na ha nyeghachi m ego m mana site na ihe m na-agụ na otu puku saịtị ịntanetị enweghịzi m olileanya ọ bụla. Nkịta m agafelarị ma ndị ohi a zuru m € 50.
M zụtara ngwaahịa ịkpụ ntutu guillete atọ, mgbe ụbọchị iri na ise gachara, ha gwara m na ha enweghị ike iziga m ụfọdụ n'ime ha maka ọrụ aka ha wee zitere m isiokwu atọ nke otu n'ime ndị m rịọrọ, mgbe m rịọrọ naanị otu ngalaba uru bụ € 15 kwa ngwaahịa Ọ kwekọrọ na ihe dị iche n'etiti ihe a na-akwụ site na mbufe na ihe m nwetarala azụ, dịka m kwurula na otu isiokwu bara uru € 4,24, ana m enweta 12, nke na-eme ka m chee na a ghọgburu m.
Anaghị m adụ ọdụ ịbanye na ụlọ a, ọ na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ n'ihe gbasara ịkwụwa aka ọtọ na ịhazi iwu.
Ahụrụ m na ha na-egbochi azịza mgbe ha enweghị mmasị na mbipụta ya
Emela ndị aghụghọ a
Ọ bụ ihe ihere ịghara ikwu okwu ndị a tupu gị na ụlọ ọrụ ndị ohi a emekọrịta ihe, n'ihi na ọ bụrụ na anyị ma etu esi eme ihe anyị agaghị azụta ihe ọ bụla. Biko ndị nwere akaụntụ na facebook ma ọ bụ tweet na-ebipụta ụdị ụlọ ọrụ bụ nke a nke doro anya na a raara nye ịnọ n'enweghị ihe ọ bụla.
Ebube Sierra dijo
Echi 09/09/2016 Ekwesịrị m ịnata iwu m. Nyaahụ ha zitere m ozi email na-ekwupụta na iwu ahụ ahapụla ụlọ nkwakọba ihe ha na njikọ a: «Iwu nyocha na PUNTOPACK Code: BIU-162381». A gwala m ha ka ha zitere m nọmba nke okwu iji nwee ike ime nzute, ebe koodu a ha zitere m anaghị adị ire. Akpọtụrụla m ụlọ ọrụ Puntopack ka m gwa m ma ọ bụrụ na BIUKY eziterela m ngwugwu m, nke ha ji obi ọma zaghachi, mana ọ bụ ozi nzuzo ma enweghị m ike ịme ya n'ihu ọha. Ihe ngwugwu m agaghi echi na abali ahu. Agaghị m emeghachi ihe niile edere na netwọkụ mmekọrịta. Naanị m chọrọ ichetara gị na agbanyeghị n'oge na-adịghị anya anatara ngwugwu ahụ, ma ọ bụ na anabataghị ya, ha anaghị agbaso ụkpụrụ iwu. Achọrọ m ịdekọ otu n'ime ha:
Mmebi iwu na mmachi
Nkeji edemede 49. Infractions na agbachitere ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ.
h) Mgbochi ma ọ bụ ịjụ ịnye data ma ọ bụ kwado ozi, nyocha ma ọ bụ ọrụ nyocha.
b) Enweghi ike irube isi na ntuzi nke usoro nkwekorita ha kwubiri n'uzo di omimi banyere ihe omuma na akwukwo nke agha gha nye ndi ahia na onye oru, oge igbu ya na nloghachi nke ugwo, ugwo, ya na nchikota nke nchikota , nke ndị na-azụ ahịa na onye ọrụ na-ebugharịghị ya na iji usoro nkwukọrịta chọrọ nkwupụta nkwupụta tupu nkwupụta ma ọ bụ enweghị mmegide sitere n'aka ndị na-azụ ahịa na onye ọrụ, mgbe ọnọdụ kwekọrọ na-adịghị.
Naanị ihe m rịọrọ bụ nọmba faịlụ iji soro usoro m. Ihe na-eso nzọụkwụ.
All ọwa nkwukọrịta nke ị na - enye ndị na - azụ ahịa mgbe niile “mechiri emechi.” N'ụzọ dị otú a na-eweta mmebi iwu n'ihe metụtara nchekwa ndị ahịa, si otú a bụrụ ndị na-akọ akụkọ na ntaramahụhụ. Na weebụsaịtị ọ bụla nke ụlọ ọrụ BILUA gị, a na-arụ ọrụ ngalaba "ndị ahịa", email ị na-enye na "ọnọdụ izugbe" anaghịzi arụ ọrụ ma n'ezie nọmba ekwentị ị nyere n'otu ngalaba enweghị ike ịnata nlezianya anya, site na na-eziga anyị otu a, gaa na channelụ nkwukọrịta ndị a kpọtụrụ aha na nkwarụ ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ. Ihe si na njedebe bụ enweghị nkwukọrịta na afọ ojuju nke ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ ahụ, si otú a na-eweta mmejọ iwu ọzọ.
M ka na-enweghị ike ime mkpesa maka enwetabeghị iwu ahụ, mana mmebi iwu gbasara mgbochi ma ọ bụ enweghị ike ịnye ozi nke onye ahịa nwere ikike adịghị mkpa.
Zaghachi na gloria sierra
Mar Moreira Gutierre kwuru dijo
Anọ m na-azụ ahịa ruo ọtụtụ afọ na ntanetị dị iche iche na ịntanetị dị iche iche na ihe yiri nke ahụ emebeghị m. Na July 24, etinyekwara m ego maka .50,23 4. Na August 8, m na-aga ezumike na achọrọ m iji ngwaahịa ndị a zụrụ azụ. Bọchị ahụ ruru na iwu abịaghị. Ihe kacha njọ bụ na mgbe m laghachiri na Septemba XNUMX, ọ nweghị ihe ịrịba ama nke ya. Akpọtụrụ m ha site na email (ọ nweghị ụzọ ọzọ a ga-esi mee ya) ha azakwala: : Anyị tọhapụrụ ndị fọdụrụ nke iwu gị ozugbo, anyị ga-aga n'ihu ịkwụghachi gị ego kwekọrọ na ngwaahịa ndị ahụ ”. Mmechi: Ha na-ebo gị ebubo ozugbo, iwu anaghị abịa ma ha enyeghị gị nkọwa ọ bụla. Mgbe ị rịọrọ maka ya mgbe obere oge gasịrị, ha na-agwa gị na ha anaghị ezitere gị ọkara nke ihe ị nyere iwu (nke ga-aba uru ịzụta). Ọ bụrụ na ịgaghị ịkpọtụrụ ha na-azọrọ iwu ahụ, ha ga-edebe ego gị na-enyeghị gị nkọwa ọ bụla. A naghị anabata ya.
Zaghachi Mar Moreira Gutierre
Agaghị atụkwasị ha obi, ọ gaghị ekwe omume iji ekwentị kpọtụrụ ha, site na email karịa otu. Oge nnyefe ga-abawanye ogologo longer. Ha ekwesighi ntụkwasị obi m, nsogbu nkwukọrịta, na ụbọchị nnyefe ndị na-ekwekọghị n'eziokwu, mmanya nke ga-enye gị isi ọwụwa. B NOTGH buy ịzụta na ị ga-enwe obi ụtọ karị, m na-agwa gị site na ahụmahụ.
Ndị nhazi a bụ ụmụ nke s ...
Asịsa gị na-echere ịkpa aka.
Abụ m onye ọzọ merụrụ ahụ nke ndị a na-enweghị ike igosipụta, mgbe m gụsịrị ihe 90 kwuru, ọ baghị uru ịgwa m okwu m n'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ, oge nnyefe na-enweghị ngwụcha, nkwukọrịta efu, nọmba ekwentị na-adịghị arụ ọrụ ... Echere m na ọ nweghị uru ịgba egwu. na weebụsaịtị a, ọ bụ ezie na O nyeere m aka ịchọta gị, mana ọ bụ oge ime ihe, ọ bụrụ na anyị jikọọ ọnụ, anyị nwere ike ịkwụsị ndị a scammers.
Anabatabeghị m iwu m mgbe akwụchara ya. Maka nsonye ha chọrọ ka m gosi nọmba ọnụọgụ na ozi ịntanetị m. Ha na-agwa m na ha adabaghị, na ha agaghị ekwe ka m hụ ọkwa ahụ. Enweghi nọmba ekwentị ịkpọtụrụ ma ọ bụ ụzọ ọzọ ọ bụla iji mara ọkwa nke otu, rịọ maka nkwụghachi n'ọnọdụ gị, ma ọ bụ ihe ngwọta ọ bụla dịịrị ọnọdụ ahụ.
M na-ahụ onwe m ka akwadoro maka oriri, yana maka ịkwu ikpe
Ndewo, m nyere iwu na-abịa n'oge, ndị
Nsogbu bụ na m rutere ebe a gbajiri agbaji, anọ m na-anwa ịbịakwute ya ruo ọtụtụ ụbọchị ma ha abanyela iziga m email na-arịọ maka foto nke m zitere site na mgbe ahụ gaa jụụ, ha azaghị ozi ịntanetị ma ọ bụ akara ekwentị egosiri na ibe a (932 200 633), emefuola m € 93 na tebụl ma enwere m ya n’ime igbe maka na emebi emebi. Ọ ga-amasị m ịnwe nzaghachi n'ime izu niile na ịgaghị ịme ikpe. Daalụ n'ọdịnihu.
Ezi ụtụtụ, aga m agwa gị maka ahụmịhe m n'ihi na karịa ijere ndị ahịa ozi, enwere m ike ịnyere ụlọ ọrụ a aka imeziwanye.
Enyere m iwu na Kidits, achọghị m ịdebanye aha, enwetaghị m ozi nkwenye, ma ọ bụ okwuntughe ……. M kpachapụrụ anya ịchekwa nseta ihuenyo nke ịzụta na pdf, ebe m nwere nọmba ọnụọgụ ahụ. maka ozi ma gụọ ha ihe ndị ahịa kwuru na amalitere m ichegbu onwe m, ebe m chọpụtara na ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ha.
Iwu ahụ rutere na ụbọchị atọ, ziri ezi. Enwere m ike iku ume.
imeziwanye; weebụsaịtị, ọrụ ndị ahịa, nchekwa na nzụta, iwu ahụ ewetaghị akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ dee ya na ọdịnaya zuru ezu na / ma ọ bụ mpempe akwụkwọ iji nwee ike ịlaghachi n'ụzọ dị mfe. n'ihi na rspidity, mma na bụghị ike a nsogbu anyị.
Echere m na echiche m na-ejere gị ozi.
Ha bụ ndị iberibe ... ụlọ ọrụ juputara na ndị na-enweghị nghọta na-aghọtaghị otu esi akọ akụkọ ha maka aghụghọ na aghụghọ. Ha na-aga site na ịza ozi. Ka ha zigachara ha ihe dị ka email atọ kwa ụbọchị ha na-aza m ma gwa m na iwu m ga-abata taa dị ka atubere m. Nọmba nsuso adịgboroja nke na-adịghị adị. N'ime ụlọ ọrụ na-ebugharị m, ha gwara m na ha enweghị ihe ọ bụla. Anọ m na-achọ ịkpọtụrụ ha ụbọchị niile na ihe ọ bụla na ụgha nke ịgwa m na taa enwere m iwu n'ihi na ha abụghị ndị nzuzu.
Abum otu onye ndi ozo ojoo a !!!
M nyere iwu a ketulu si Wellindal na ngwaahịa ahụ rutere, ma na a mwute ọnọdụ.
Nkwakọ ngwaahịa dị mma, mana n'ime ya bụ ihe ihere: igbe ngwaahịa mebiri ma wrinkled, oghere nke ketulu ahụ gbagwojuru anya site na ịkụ, enweghị akwụkwọ nnyefe ma ọ bụ nnata ma ọ bụ ntuziaka, ezigbo ihe ihere ...
Anọ m na-anwa iweghachite ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa ma ọ nweghị ụzọ. Enweghị ike ịkpọtụrụ ha na ekwentị n'ụzọ ọ bụla.
Ekwentị 933967172 nwere igwe azịza na ọ bụrụ na ị maghị mgbatị ahụ, ha kwụgidere gị.
Mgbe ọtụtụ ozi gachara site na webụsaịtị ahụ, ha degara m akwụkwọ ozi gwa m na "ndị si Post Office" ga - abịa ịnara ya n'ụlọ m, si otu a na - enweghị ozi ọzọ.
Akpọrọ m post ọfịs na ha enweghị ndekọ, nke bụ aghụghọ !!!
Azụla na ibe a ma nye ndụmọdụ ebe ịnweghị ike ịme ya.
A ga-emerịrị usoro iwu megide ndị a ka ha wee ghara iduhie ọtụtụ mmadụ.
Zaghachi na Betlehem
Anyị nwere ike ịmepụta otu facebook ebe mmadụ niile nwere ike ikwu okwu
Ezi echiche, m na-akwado ya.
Pedro Liano dijo
Ha bu eziokwu “uzo diri”, ihe nile aguru na mbu adighi aka. Ha ghọgburu gị n’ezie, ha ji iwu a wayo gị, jiri ego ebubo ma ọ bụ ndepụta ego, MGBE MGBE OZI ATỌ NA-EGO Ọ B ASR AN N ’URB ASRG URB TOR H NA 24 OHU na mgbe ha zigara ha 30 ma ọ bụ karịa ozi ịntanetị ha zara gị na nke na-efu otu n'ime ngwaahịa ndị ahụ, ọ bụ otu mgbaghara, echere m na azụmahịa ahụ ga-enwe ego gị ruo mgbe ha enweghị nhọrọ ọ bụla ma weghachite ya ya ma ọ bụrụ na mkpesa ma ọ bụ ihe yiri ya ma ọ bụ na ọ bụrụ na ọ gaghị edebe ya, ha nwere ya etinyere n'ụzọ dị otú a na ha kpọsaa ọnụ ahịa dị ezigbo mma na-ekwe nkwa ụdị ego ọ bụla maka ndị mmadụ ịta arụ na ọbụna na-adọta ndị ọzọ na-azụ ahịa site na ịkwekwu ego maka ha abụọ dị ka aghụghọ aghụghọ nke pyramid ebe otu onye ahịa na-aghọgbu nke ọzọ; ma ọ naghị akwụsị ebe ahụ, n'elu ha ha HAZE gị mgbe ị nwetachara ego gị site na izitere gị email nke ha ji obiọma nye gị ụdị ngwọta ọ bụla, echere m na ha ga-achọ ịnweta ederede alibi tupu enwere ike SCAM ikpe. Ha bụ ezigbo MAFIA, Nhazi ahaziri ahazi, ana m atụ ụjọ na n'otu oge mgbe ha nwere nnukwu nnakọta maka iwu na-echere ka ha ga-enye ụjọ ma pụọ ​​na ego niile
Zaghachi Pedro Liaño
Carolina Pacheco Meza dijo
You nwere ike ịgwa m ihe kpatara na anaghị m akwụ ụgwọ maka iwu m n'ụlọ akụ mana iwu m kwadoro, ha nwere ike izigara m ya wee nwee ike ịkwụ ụgwọ?
Zaghachi Carolina Pacheco Meza
N'iji ohere zoro ezo, otu a ka ha si eme ya ugbu a. Azụtala m site na Fruugo peeji dị ka amazon, ebe a na-akwado ha dị ka ndị na-ere ahịa. Isiokwu ahụ eruteghị m wee malite ịjụ ajụjụ ruo mgbe m chọtara ihe ndị a, ọ bịabeghị m wee mee mkpesa na m nwere mkpụrụ osisi mana m banyere bilua ahụla m na isiokwu ahụ na-etinye na-enweghị stok, ya bụ, agaghị m anata ya. Luckily mgbe m na-amaghị ndị na-ere nke ọma, M na-akwụ ụgwọ na PayPal ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ihe ọ bụla na niile! ... ya mere n'oge na-adịghị anya mgbe ha gwara m ka m ghara ịtụfu isiokwu ahụ, m na-emeghe ikpe site na Paypal ma tinye ha na ndepụta ojii. Site n'ụzọ, azụrụ m otu ihe ahụ na Amazon nke ahụ otu ihe agaghị eme m. Ekele m na jisie ike.
Ndewo, ndị eze achọwo m, ọ dị m ka ya bụrụ na m batara ebe a n'oge gara aga, iji chekwaa obere ego, agbabala m onyinye ndị eze, ọ bụrụ na ị nwere ike, azụtaghị na weebụsaịtị a, ezigbo ihe nzuzu, m meghere ihe merenụ na Paypal, ebe ọ bụ na weebụsaịtị ha anaghị azaghachi, ma ọ bụ na ha na-aza ihe ndị na-enweghị isi dịka "Anyị na-eche azịza" Kedu azịza ma ọ bụrụ na onye na-ajụ m bụ?
Na mpempe, a Web adịgboroja, aghụghọ na ojoro
Biko, sonyere ndi otu Facebook a, ka imara ma anyi ga - eme ihe: Otu ihe metụtara Bilua / Wellindal / Miscota
OMG !!! Gini mere na ahughi m peeji a tupu !!! ?? Emere m nzụta na Sọnde gara aga site na ihe m hụrụ na m nwere ike ichefu ịnata ya ... .. Ọ tụrụ m n'anya na ọ nọ na "nhazi" steeti kemgbe Sọnde mgbe ebumnuche na nnyefe ahụ ezubere maka ụnyaahụ Wenezde ... ..i bụrụ onye ọzọ aghụghọ sc.: (((()
Zaghachi Victor Martinez
Naanị aha ndị a nwere bụ ndị ohi.
Mgbe ihe dị ka ọnwa anọ gachara, anaghị m enweta ego nke nloghachi nke ihe ahụ ezitere m n'ọnọdụ dị egwu ma n'ezie m laghachiri.
N'ihi ntinye akwụkwọ mkpesa ahụ site na mkpakọrịta ndị na-azụ ahịa, ha zitere m ozi email na-ekwu na ha ga-akwụ ụgwọ na 14 ụbọchị na-esote.
Nke a bụ otu ọnwa gara aga na enwetabeghị ihe ọ bụla.
Ekwela ka ghọgbuo gị ma kpọsaa ya ebe ị nwere ike, ụlọ ọrụ a na-aghọgbu na aghụghọ.
Site n'oge ruo n'oge ha na-abanye n'ime forums dị ka nke a na ozi nke ọmarịcha ịzụ ahịa na ọgwụgwọ mara mma. Ọ B A IEGHA, ha bụ ndị na-akpọsa ha ka ha gaa n'ihu na-aghọgbu ndị nwere ezi okwukwe.
Maka nke m, Achọrọ m ịga na njedebe, ọbụlagodi na m na-emefu ego karịa isiokwu a na-ekwu, ọ bụrịrị okwu nke ụkpụrụ.
Ha bụ ụyọkọ ndị ohi. Echere m na ihe ha n’agbalị ime bụ ka y gbagwojuo gị anya ma hapụ ego gị.
Azụrụ m kọmputa iji zitere m na 24/48 awa. Mgbe otu izu m na-enweghị ozi banyere ya. Dị ka ha si kwuo, ha nwere ndị ọrụ ndị ahịa nke ndị mmadụ 50, mana ha enweghị ekwentị ma ịgwa ha okwu site na email bụ odyssey.
Ha zaghachiri na ha nwere nsogbu ngwaahịa na ọ bụ ya mere ọ ga-eji wee zite m kọmputa ahụ ogologo oge. Agbanyeghị, na ntanetị ngwaahịa a ka na-adị.
M na-arịọ kagbuo nke iji. Laterbọchị ka e mesịrị, ha na-agwa m na emechaala na m ga-enweta ego ahụ na ụbọchị 3. Liegha ọzọ: Anọla m na-eche 7 na ihe ọ bụla
Ozi ịntanetị na-ewe ogologo oge iji zaghachi ma ọ na-akpaghị aka mgbe niile, ha enweghị ekwentị, etinyela m ikpe m na ibe FB ha ma gbochie m. Ha enweghị ike ịkọwapụta ha.
Aga m akatọ ha taa, mana anyị kwesịrị ịhazi ihe ọnụ. Site na ihe m huru ebe a, enwere otutu anyi ndi no n'otu onodu. Y’oburu na inwe mmasi ide m: angelvilchescerrato@gmail.com
M ugbu a kere a FB otu ịhụ ma ọ bụrụ na ọnụ anyị nwere ike ime ihe: «Group nke metụtara Bilua / Wellindal / Miscota»
Chọọ ya biko ma dịrị n'otu. Daalụ!
Taa m gbara akwụkwọ mkpesa na paypal. Ọ na-eme kpọmkwem otu ihe ahụ. IHE Ọ B NOGHTH IWU BH R WEB.
Azụla, ụbọchị iri atọ na-echere mbupu ahụ ma ha anaghị enye akara, ha anaghị aza ma ha azaghị ozi ịntanetị, aga m akpọtụrụ ụlọ akụ m ka m rụọ ọrụ nchebe visa wee nweta ego m… Azụghị ebe a !!!!
Ndewo m, a na m anwa ịbịakwute gị ụbọchị niile, ihe omimi site na ihe m hụrụ na ibe a ị na-akpọ ekwentị a n'ụtụtụ ma ị zaghị. Akpọrọ m gị maka na I boro m ugboro abụọ maka otu iwu ahụ (MIS-ES-170129130752a) ị gwala m na ị ga-agbapụta m ozigbo na m ga-enweta email dị ka emere. Echere m ma ọ nweghị ihe. Ana m agbalị ịbanye ọzọ na Ọ BTHGHTH. Are bụ scammers, Achọrọ m ịkọọrọ gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa gaa na adreesị mmekọrịta gị na Llinars iji nwee ike ịgwa gị okwu. Ga-eweghachitere m ego ahụ ọbụlagodi na achọrọ m ịchụ gị ụbọchị na ụbọchị, ọ bụrụgodi na m ga-eche ọtụtụ afọ maka ya. EGO B IS EGO. NA-AKPATA
Bilua ghọgburu ya dijo
Otu okwu yiri nke gị mere m na anatabeghị ego ma ọ bụ ngwaahịa ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa. Dị ka m hụworo n'oge na-adịghị anya n'ọtụtụ nkwupụta, enwebeghị m ike ịkpọtụrụ ha n'ụzọ ọ bụla.
Esi m na Barcelona, ​​ebum n’uche m bụ ịga adres anụ ahụ n’izu a. Mgbe m hụrụ okwu gị, ahụrụ m na ikekwe ị gụrụla njikwa, m ga-achọ ka ị gwa m ma ọ bụrụ na enwere onye n'anụ ahụ ma ọ bụ na ọ dị ka ọ bụ ụlọ ọrụ »phantom».
Ana m ekele gị tupu oge eruo maka enyemaka gị.
Zaghachi na Bilua
Anne DUBOST dijo
Aga m etinye iwu mana peeji ahụ yiri m ihe iju anya n'ihi ya ahọrọ m ịkwụ ụgwọ site na mbufe. Mgbe ahụ achọrọ m echiche na andntanetị wee hụ ihe m hụrụ, n'ezie akwụbeghị m ụgwọ.
Ezitere m ha ajụjụ abụọ gbasara ngwaahịa ma ha azaghị m, ọ dị ka ibe mmụọ.
Zaghachi Anne DUBOST
Unpresentables Miscota dijo
Kpamkpam kwekọrịtara n'ihe niile m nyere, ha enweghị atụ.
Zaghachi ka Miscota na-enweghị atụ
mmụọ ozi na-acha akwụkwọ ndụ dijo
AHPRR IM PRLỌ NA-EME EGO na 10-2-17 M gbara akwụkwọ na OCU yana m gara n'ụlọ akụ m ka VISA wee nwee ike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke m na-eme ... BILUA ụlọ ọrụ nke yiri ka enwere mmekọrịta, ọbụnadị site na ekwentị-email-facebook wdg ... na ndị ọrụ niile hụrụ nke a iji zere ịzụta site na ibe a
Na Tọzdee, Febụwarị 2, ajụrụ m maka bọọlụ okpokoro na weebụsaịtị Kidits, akwụrụ m ịnata ya na awa 24 ma ọ nweghị ihe ọ bụla, ọtụtụ oku na-azaghị, ozi na Facebook nke ha zara m ka m kpọtụrụ site na weebụsaịtị ha. , ọtụtụ ozi ịntanetị na ha zara naanị otu! Mana n'ime ihe ọjọọ, taa anatara m ya mgbe ụbọchị asatọ gasịrị. M na na na na kechioma mgbe niile m na-agụ. Enwere m olileanya na ị nwere obi ụtọ ma dozie ya! O doro anya na agaghị m azụta ihe ọ bụla n'aka ndị a ọzọ, ha enweghị ike ịkọwapụta !!
Francisca Maldonado Molina dijo
Abụ m onye ọzọ na-emetụta Bilua (Wellindal). Ebe ọ bụ na azụrụ m okpokoro ogige n’April 14, SEUR mechara zitere m email na-ekwu na ọ na-eweghachi ngwugwu ahụ n’ihi na ọ gbajiri. Kemgbe Eprel 21 m na-eche nkwụghachi nke ego ọ bataghị. Ọ bụrụ na enwere mkpakọrịta iji kpesa ndị aghụghọ a, ọ ga-amasị m isonyere ha.
Zaghachi Francisca Maldonado Molina
Sylvia Lobera Pascual dijo
Enwekwara m ngwaahịa nwere nkwarụ, mana enweghị ụzọ m ga-esi gwa onye ọ bụla okwu iji weghachite ya. Ha anaghị aza ekwentị ma ha azaghị ozi ịntanetị. Ikwesiri ikpesa ha
Zaghachi Sylvia Lobera Pascual
Adịghị njọ ọrụ. Agaghị m ekwughachi, n'ezie.
Azụrụ m ihe ole na ole kwụrụ ụgwọ site na Paypal. Naanị otu na n'elu rutere n'oge na-atụghị anya.
Ha emebeghị m ka m laghachi na n'agbanyeghị otu m zigara ozi-e, ha na-aza m na akpaghị aka, na-enyeghị m azịza. Ọzọkwa, ọ dịghị onye na-aza site na ekwentị.
Ọrụ dị egwu.
Ọrụ dị egwu. Agaghị m azụta ihe ọ bụla na ibe gị
Egburu Ya dijo
Naanị m chọrọ ị nweta ego m ma ọ bụ zitere m Onyinye m… ..
Dị ka ndị ọzọ niile, ha anaghị aza n'ụzọ ọ bụla site na usoro nnyefe edozi ma ahụrụ m na ha enweghị ebumnuche ịlaghachi ego….
Maka ndị anyị na-azụta ntanetị, nke a bụ peeji na-eduhie eduhie, m ga-agwa ndị na-achọ ozi tupu ịzụrụ nke ahụ site na ịchekwa euro 8 ha nwere ike ida 60….
Zaghachi ka Kidits duhiere gị
Ọzọ emetụta ọzọ.
Enyere m iwu na nlezianya, nke ha na-ekwe nkwa nnyefe nke ngwaahịa na awa 24-48. Mgbe m nọrọ ihe karịrị awa iri asaa na abụọ m gbalịrị ịkpọtụrụ ha ma ọ gaghị ekwe omume. Enweghị ike ịkpọtụrụ ha. Ha anaghị enye nọmba ekwentị na weebụ, ma ọ bụ email. Naanị ha na-ahapụ nhọrọ ahụ site na 'ịkpọtụrụ', mana ha azaghị. N'agbanyeghị ụbọchị ole na-aga, ha anaghị azaghachi.
My ikpe na-mụbara paypal, M ga-eme mkpesa na Oruru nakwa ebe ọ dị mkpa.
Aga m ede ma gwa ya niile na netwọkụ mmekọrịta na YouTube n'ihi na enwere m olile anya ma chọọ ka onye ọ bụla ghara ịghọgbu ya. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ha otú ha si eme omume na otu ha si emeso onye ahịa ahụ.
Enyere m iwu BEI-ES-170627011109b na peeji ụmụ ewu na ụlọ ahịa bilua na n'ihi na enwetaghị m azịza doro anya banyere ụbọchị nnyefe nke ngwaahịa a, ekpebiri m ịkagbu iwu m, ha gwara m na m ga-enweta nloghachi na 14 ụbọchị na n'ezie enwetabeghị ihe ọ bụla. M ga-eme mkpesa nakwa na netwọk mmekọrịta. ahụmịhe na-adịghị mma na ndị a ...
nke jose dijo
Ndị a bụ ndị ohi ọkachamara. anaghị azụta ihe ọ bụla na weebụsaịtị a. Enyere m iwu 12 ụbọchị gara aga ma anatabeghị m ya. On Monday m ga-akọrịrị ìgwè a na ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa.
Zaghachi Pablo Jose
Birgit Dietgrich dijo
Na Tọzdee July 20, 2017 M nyere iwu na Miscota a Voltrega Cage mod. 430GG Ngwaike onu: 79 x 67,5 x 167 cm maka € 96,50. Enwetara m otu onu ahụ, mana nke pere mpe, ọkachasị 10 cm, n'akụkụ nke ọ bụla. Enweghi m ike ịkpọtụrụ Miscota ma ọ bụ site na ekwentị ma ọ bụ site na isoro ntuziaka ka esi azọọ site na Mail, ọ na-ajụ akwụkwọ ozi m, n'ihi na dị ka ha si kwuo, nọmba ntinye m ziri ezi! Akpọrọ m BILUA na Mọnde 31/07 ha kwere nkwa idozi ya. Ruo taa, ọ bụghị email na-adịghị mma, kpọọ ka ị kọwaa ihe na-eme. Lee ihe ihere, na ụlọ ọrụ na-ekwe ka ha mee otu a. N'ụzọ niile m ga-aga n'ihu ịkọ ihe oriri.
Zaghachi Birgit Dietgrich
Lourdes Romero Colomer dijo
Ọbụna echela banyere ịzụta ebe a ma ọ bụ na Wellindal. Azụtara m oche na July 2 ma ọ bụghị naanị na ọ ruteghị m, mana ha anaghị aza ozi ịntanetị ma ọ bụ ekwentị ahụ. Aga m ekwupụta OCU na Payal. Site na ụfọdụ kọntaktị dị mkpa m nwere, anyị ga-enwe ike imechi web maka ha ma chụọ ndị aghụghọ ahụ.
Zaghachi Lourdes Romero Colomer
Vicente Chico Perez dijo
Onye ọzọ ghọgburu ọzọ, n'ọnọdụ m euro 80,
Kemgbe Mee ga-anata ya, ka ọnwa atọ gachara, ha gwara m na enweghị, na m họrọ ihe ọzọ, ahọrọ m ịlaghachi ego ahụ, m ka na-echekwa, ha azaghị ozi ịntanetị ọzọ, ha enweghịkwa ekwentị.
N'okwu m, ụlọ ọrụ otu ebe a na-egwu m bụ KIDITS. site na Internetntanetị.
Ndị aghụghọ …….
Gbasaa ya na netwọkụ mmekọrịta niile, ka onye ọ bụla ghara ịda ọzọ
Zaghachi Vicente Chico Pérez
Jose Ramon Figueiredo Villar dijo
Ndi nwe obodo Bilua etinyegoro m iwu abuo na ref-Mis-Es-170822145807c na Mis-Es-170830101848a nyefe ụbọchị 13 na 19 nke 09, 2017 ma anabatabeghị m, a na m eche ka nzaghachi nye iwu m.
Zaghachi Jose Ramon Figueiredo Villar
Ezigbo Laurence (Bilua): Abụ m Jose Ramon Figueiredo Villar M etinyewo iwu, Mis- Es-170822145807c na Mis- Es-170830101848a maka ego nke € 285,98 nke ị kagburu n'ihi enweghị ngwaahịa iji nweta nkwụghachi nke kwuru nyere iwu site na otu usoro m ji akwụ ụgwọ. Na-eche maka nkwụghachi, ekele; Nọmba kọntaktị m bụ 664494402.
Ọ ga-amasị m ịma ebe iwu m dị: # MIS-ES-1709151147053
Ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ Misciota, ha enweghị nọmba ekwentị ịkpọtụrụ ma ọ bụ email. M na-ezitere ha ozi nzuzo na ibe facebook ha na nke ọ bụla.
Ọ bụrụ na ha eziteghị m ihe m kwuru ma ọ bụ na ha anaghị akwụghachi ego m na-akwụ ha, m ga-ebido site na ịkọtara ha ọrụ ndị ahịa.
Ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ Miscota, ha enweghị nọmba ekwentị ịkpọtụrụ ma ọ bụ email. M na-ezitere ha ozi nzuzo na ibe facebook ha na nke ọ bụla.
Ezigbo: Laurence (Bilua) Abụ m Jose Ramon Figueiredo Villar, ị na-agwa m na ị kagbuola iwu m: Mis-Es-170822145807c na Mis- Es- 170830101848a n'ihi enweghị ngwaahịa, ngụkọta nkwụghachi nke iwu bụ € 285,98 na mee ya Otu usoro ịkwụ ụgwọ ahụ m jiri, na-echere nkwụghachi ị natara ekele na nọmba ekwentị m. bụ 664494402, Daalụ.
Ndewo, abụrụ m otu aghụghọ ọzọ nke ndị a. Enweela m iwu na ụmụ ewu, nke kwesịrị ịbata na Fraịdee gara aga, mana ọ dịghị ihe ọ bụla. M na-agbalị ịhụ ọnọdụ nke iwu m ma ọ pụtaghị ọbụna ka eserese, ọ ga-amasị m isonyere mkpesa ahụ. You nwere ike ịgwa m otu ị si eme ya?
Ndewo, abum onye ojoro ozo, mana gini ka ha ga eme?
TR NOTGH R anataghị !!! Kemgbe November 11 BEI-CZ-1711121152227. Maazị Albert Costa nwe nke a «ụlọ ọrụ» Achọrọ m ma m iji ma ọ bụ ego m yaaa !!!
Ọ nwere onye gosipụtara ebe ahụ?
More nke otu…. Ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta! Achọrọ m isonye na nkwupụta / mkpesa, scammers !!! Achọrọ m ego m ... ụlọ ọrụ na nke a bụ Kidits, ha enweghị ngwaahịa ... Arịọla m ka akwụghachi m ego m na email nke yiri mmụọ n'ihi na ha azaghị ... enwere mmadụ nyeghachiri ego ahụ?
James, ewela iwe iwe tinye mgbasa ozi gị ebe a
Wellindal ghọgburu m. Kpọmkwem ihe ị na-ekwu. O yiri m ihe ijuanya na ndị aghụghọ a nọgidere na-arụ ọrụ.Ejirila m akwụkwọ ikike iji nweta ma ọ bụrụ na m nwetaghachi euro 700 nke ha fụrụ m. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị gakwuru ndị nchekwa obodo ma ọ bụ onye ị ga.
VERA TERESA dijo
Enyere m iwu na Mimub.com dabere na otu Bilua, ha were ogologo oge iji wepụta ma kagbuo iwu ahụ, nke a bụ na 19/04/2018, m ka na-eche ka eweghachite ego m. Ugbu a ha emechiela weebụsaịtị, onye nwere ike ịdụ m ọdụ?
Zaghachi TERESA VILLAR
Javier Moran dijo
Azụrụ m na May 1 na Wellindal, na abụ m onye aghụghọ ọzọ, ha kagburu iwu m mgbe ụbọchị 10 gasịrị n'ihi na ha enweghị ya, ha na-alụ ọgụ ruo otu ọnwa na ọkara na ha anaghị eweghachite ego m. Ọ dị ịtụnanya na ọ nweghị ikike nwere ike imechi ibe ndị a wayo
Zaghachi Javier Morán
Google nwere ike mepee ụlọ ahịa anụ ahụ na New York n'oge na-adịghị anya